အချစ်သည် စိတ်ကူးမှုတဲ့လား – Grab Love Story
ကျနော် နဲ့သူ … စတွေ့တဲ့ နေ ရာက … ရွှေဘုံသာလမ်းက … ချ စ်တီးထမင်းဆိုင် မှာဗျ … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆို င် … အဒဲီနေ့က … ကျနော်ချ စ်တီးထမင်း စားချ င် နေတ ယ် … ရွှေဘုံသာလ မ်းကို သွာြး ပီး … ချစ်တီးထမင်း ဆိုင် မှာ … ကျနော် သွားစာြး ဖ စ်တ ယ် … ကုလားအစား အစာကို … သိပ်မြ ကိုက်ပေ မ ယ့် … တခါတလေတော့ စာြး ဖ စ်ပါ တ ယ် … ကြိုက်တယ် … ငှက်ေ ပျာရွက်ပေါ် မှာထမင်းပုံ ပေးတယ် … ပဲ ဟင်းရည် ချိုင့်ဆွဲ ထားတဲ့ကုလားလေးက … ပဲ ဟင်းရည် ကို … ထမင်းပေါ် မှာ ဆမ်းပေးတယ်… ဆားနဲနဲ တို့လိုက် … ငရု တ်သီးစပ် စ ပ် ကို ကိုက်လိုက် … ရှူးရှဲ ရှူးရှဲနဲ့ … ချစ်တီးထမင်း စားရတာ … မြိ န်လိုက်တာဗျာ … အားလုံးစားပြီးတော့ … မနု ဿီ အရည်တခွက် သောက်လိုက်သေးတယ် … ကောင်းပါ့… ဘေစ င်မှာ လ က်ကို သွားဆေးတဲ့အချိန်ကျမှ … ကျနော် သူ့ကို … သတိထားမိတယ် … ချော လိုက်တာဗျာ …
ကျနော့်စိတ် ထဲမယ် … ပ တ်ဝ န်းကျင် က အရာ အားလုံးကို မေ့ သွားတယ် … ချောလိုက်တဲ့ မိန်း မလှလေး… ရှ င်းပြီးသ န့်နေတဲ့ … ကုလားမလေးရဲ့မျက်နှာပေါ က်လေးက … တော်တော်လှတယ်ဗျ … မျက်လုံးလေးက …
လုံးပြီး ၀ိုင်း စ က်နေတာပဲ … သမင်မျက် လုံးမျိုးပဲ ဆိုပါတော့… မျ က်တောင် ရှ ည်တွေ ကလဲ … ကော့ပြီး ညွှတ်နေတယ် … နှာတံလေးကလဲ စ င်းစင်း လေး… နှုတ်ခမ်း လေးကလဲ ပါး ပါးလေး … ကျနော် အရမ်း စိတ်ဝ င်စားသွားတယ် … ကုလားမဆိုပေ မ ယ့် … အသားမမဲ ပါဘူး … သိပ်လှတယ် … အသားအရည်က ဖြူ ပီး နို့နှ စ် လိုပဲ … ၀ င်ြး ပီးတောက်ပေ နတယ် … ဟုတ်တယ် … သူ့ရဲ့ ညာဖ က်ပါး မှာ … ပါးချိုင့် လေးရှိ တယ် … မဟုတ်ဘူး … ဘယ်ဘက်ပါးမှာလဲရှိတယ်ဗျ … နှ စ် ဖက်လုံးမှာ … ပါးချိုင့်လေးတွေရှိတ ယ် …
ဂါ ဝန် ရှည်ခေါ်မလား … အေ ပ်ါအော က် တဆက်တည်း … အမဲရော င် ဂါဝ န် ရှည်ကြီးဝတ်ထားတ ယ် …
မြင်လိုက်ရတဲ့ ခ ဏမှာ … သူ့ရဲ့အမဲရော င် ဂါ ၀ န် ရှ ည်ြ ကီးအောက်က … ရင် သားဆိုင်ေ တွက … ထွားတယ်ဆိုတာပါပဲ … ကုလားမလေးမို့ … ထွားတာလားမသိ … ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် နဲ့… တင်းတင်ြး ကီး မို့ နေတာက တော့ … ထင်းကနဲပဲ … တခြားဝိုင်းက ကောင်တွေ ကလဲ … ရှိုးေ နြ က တယ် … သူ့ပုံ စံကအေး ဆေးပါ ပဲ … ယောက်ျားလေးတွေ င မ်းတယ်ဆိုတာ ကြုံနြေ က … ဖြ စ်နြေ က … ပုံ စံ နဲ့တူတယ် … ဂ ရုမ စိုက် ဘူး … တယောက်ထဲ … အေးအေးဆေးေ ဆး … ထမင်းစားေ နတယ် … ကျ နော်… အရမ်းစိတ်ဝ င်သွားတယ် … သူ ဘယ်သူလဲ … သူ ဘယ်မှာနေလဲ … သူက အပျိုလား … ကျနော်သိချ င် တယ် … ကျနော်စိတ်ဝ င် စားတ ယ် … ဖြစ်နို င် ရ င် … ကျနော် နဲ့သူ … သမီးရီး စားဖြစ် ချ ငတ်ယ် … လူမျိုးလဲမတူပါဘူး … ဘာသာတော့မတူနို င်ပါ ဘူး …
ဒါပေမယ့် … ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ … သူ့ကို …ြ မင်ြ မ င် ချင်း ချစ်သွားတ ယ် … ကျနော် သူ့ကို ချစ်တယ် … သူ့ကို ဘယ်လိုစကားပြော ရ မလဲ … ကျနော်မိတ်ဆက်ချ င်တယ်… သူ ဖြတ်ကနဲ … မော့ကြည့်တယ် … ကျနော်နဲ့ အကြည့်ချ င်း ဆုံသွားတယ် … ကျနော် မျ က်စိ ယောင်ြ ပီး မှိတ်လိုက်မိတ ယ် … သူ စိတ်တိုသွားတာလားမသိ … ဖျ ပ်က နဲ ဟိုဘက်လှည့်သွားတယ် … ဟာသွားပါ ပြီ ဗျာ … ကျနော်ဘာလုပ်လိုက်မိမှ န်း မသိပါဘူး … ကျနော်ဘေ စင် ဘေးမှာ မတ်တ ပ် ရ ပ်ရ င်း … သူ့ကို ငြေး ကည့်နေဆဲ … သူ စားလက်စ ထမင်း ကို ရပ်လိုက်တယ် … လက်ဆေးဖို့ သူ ထ လာတယ် … ကျနော်ရပ်ကြ ည့်နေဆဲ … သူ အနားေ ရာက်လာတယ် … သူလက်လာဆေးတာ … ကျနော် ငေးကြည့်နေမိတ ယ် … သိပ်လှတယ်ဗျာ … ခန္ဓာကိုယ်အချိုး အစားက … ဖွံ့ဖွံြ့ ဖိုြး ဖိုး နဲ့ တင်းတင်းရ င်းရင်း ရှိတယ် … လက်ကလေးတွေက လဲ … သိပ်လှတာပဲ … လက်သည်းမရှည်တရှည်လေး… အြ ဖူေ ရာ င် လက်သ ည်းခွံလေးကို … ဘာအေ ရာ င် မှ မဆိုးထားဘူး … သူ့အနံ့ကမွှေးတ ယ် … သင်းသ င်းလေးနဲ့… မွှေး တယ် … ကျနော်… သူ့ကို စိုက်ြ က ည့်ရင်း … မိတ်ဆက်လိုက်မိတယ် …
“ကျနော့် နာမ ည်သော်ဇ င် ပါခ င်ဗျ … နာ မည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျ …”
“ရှ င် … ဂျူလီယာ့ နာမ ည်လား …”
“နာ မည်က ဂျူလီယာပါရှ င့် …”
“ေ အာ် … ဟုတ်ကဲ့ … တွေ့ရတာ ဝမ်း သာပါ တ ယ် …”
“ကျမကတော့ဝ မ်းနည်းပါတ ယ် …”
“အင် … ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ …”
“ေ နာ က်က လိုက်မလာနဲ့ေ နာ် … မြ ကိုက်ဘူး “
ကျနော် … ကွက်ကနဲ မျ က်နှာ ပျက်သွားတယ် … သူ လ က်ဆြေး ပီးတော့… ကျနော့် ကို လှည့်တောင် မြ က ည့်ဘူး … ကောင်တာ မှာ … ပိုက်ဆံရှ င်ြး ပီး … အြ ပ င်ကို ထွက်သွားတယ် … ကျနော်ဝ မ်းနည်းသွားတယ် … သူ့ရဲ့သိပ်လှတဲ့ … နော က်ပို င်း အလှကို … ငေးပြီး ကျန်ေ နခဲ့တယ် … ဆံပင် ရှည်တွေ ဝေ့ကနဲ ဝဲ ကနဲ နဲ့… အြ ပင်ကို ထွက်သွားတဲ့ ပုံ လေးက … ဒေါင်းမလေး … လျှောက်သွားသလိုပဲ … ဒေါက်ဖိ န ပ် မ စီးထားတာတောင် … သူ့ရဲ့တင်သားဆိုင် လေးတွေက … အပေါ်ကို … ပ င့်ြ ပီးကောက်တတ်နေတယ် … ကျနော် လိုက်ကြ ည့်မ ယ် … သူ ဘယ်မှာနေလဲ … ကျနော် သိချ င်တ ယ် … ကေက်တာမှာ ပိုက်ဆံ အြ မ န် ရှ င်းပြီးလိုက်ကြ ည့်တော့ … သူက လမ်းထိပ်ေ တာင် ရော က်တော့မယ် … ကျနော်နော က်ကနေ သွက်သွက်လေးလိုက်ပြီး … သူ ဘ ယ်သွားလဲ နော က်ယောင် ခံလိုက်မိတယ် … သူ့လမ်းလျှော က်ပုံ က တမျိုးဗျ … ကော့တက်နေတဲ့ တင်သားဆိုင် နှ စ် ခုက …
ရေလှိုင်းလေးလိုပဲ … လှုပ်လှုပ်သွားတယ် … ဇာအနားသတ် ဂါဝ န် ရှည်ကြီး … ဝဲ ကနဲ ဝဲ ကနဲ …ြ ဖစ်ြ ဖစ်သွားတ ယ် … ကျနော်ကြို က်တယ် … လိုက်ကြည့်နေ မိတယ် … သူ … တိုက်တ တိုက်ေ ပါ် … တက်သွားတယ် … လှေခါးက ကျဉ်းကျဉ်းလေး …မော့ကြ ည့်လိုက်တော့ … တိုက်က သုံထပ်တိုက် … သူ ဘ ယ်အခန်းမှာ နေ တာ လဲ … ဒုတိယထပ်လား … တတိယထပ်လား … ဘယ်လား … ညာလား … ကျေ နာ် တ အားသိချ င်တယ် … ကျနော်လိုက်တ က်သွားတယ် … လှေခါးသုံးထစ်လောက် တက်ရုံပဲ ရှိ သေးတယ် … သူ ဒုတိယအထပ် မှာ … ခါးထောက်ပြီးရ ပ် စော င့် နေတယ်…
“ရှ င် … ကျ မ နော က်ကို … ဘာလို့ လိုက်လာတာလဲ…”
“ချ စ်လို့ …”
“ဘာာာ…”
ကျနော့်ပါး စ ပ်က … လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတယ် … တကယ်ပါ … ကျနော် သူ့ကို ချစ် တယ် … ကျေ နာ့်စိတ်ထဲ ချ စ်ေ နတာကို … ထိန်းသိမ်း မထားချ င်ဘူး … ဖွ င့်ထုတ်ပစ်လို က်ချ င်တယ်…
“ကျမ သေသာသေလိုက်ချ င် တော့ တယ် …”
“ခ င် ဗျာ… ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ …”
“ဟိုတယောက်လာရင် … ရှ င် အရိုက်ခံ ရလိမ့် မယ် … ပြန် ပါရှ င် နော် …”
“မဟုတ်ပါဘူးဗျာ … ဘာလို့အရိုက်ခံ ရ မှာလဲ … ဂျူလီယာက … အိ မ် ထော င် ရှိလား …”
“အို … မရှိ ပါ ဘူး … ပြန်ပါနော် … ကျမတောင်းပ န် ပါ တယ် …”
“ဒါဆို … ကျေ န်ာက … ဂျူလီယာနဲ့ နောက်ထ ပ် ဘယ်လိုတွေ့ခွ င့် ရ မှာလဲဟင်”
“ရှ င့် မှာ ဖုန်း ရှိ လား …”
“အင်း ရှိတ ယ် … ဒါ ကျေ နာ့် လိပ် စာကဒ်”
“အင်း … အင်း … အခု တော့ ပြန်လို က်ပါနော် … ကျမ ဖုန်းဆ က်လိုက်ပါ့ မ ယ်ရှ င့် “
“ဟုတ်ကဲ့ … တက ယ်ဆက်မယ် မှတ်လား”
“ဂျူလီယာက မလိမ်တ တ်ဖူး “
ကျနော် … အိမ် အော က်ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ် … သူ လှစ်က နဲ ပြုံးပြတယ်… ဟိုးအေ ပါ် ထပ်ထိ တက်သွားတယ် …
ပြီးတော့… သုံးလွှာပေါ့ … ညဖက်ကိုဝင်သွားတ ယ်ဆိုတော့ … သုံးလွှာ ညာဖက်ခ န်းပေါ့… အိုကေ … သူ ဘယ်မှာနေလဲ ကျနော်သိရြ ပီ … ကျနော့်ကို သူ ဖု န်းဆ က်မ ယ်တဲ့ … ပျော်တယ် … ကျေ လဲ ကျေနပ်တယ် … အိမ်ြ ပန် ရောက်တ့ဲအထိ… ဖုန်းတမျှော်မျှော်နဲေ ပါ့ … ကျနော်ကလဲ ပိန်း ပါ့… သူ့ဖု န်းနံ ပါ တ်လေးတောင် … မတော င်းမိ ဘူး … သူ ဆ က်မှာပါလေ … ကျနော် သူ့ကို ယုံတယ် … နားထဲ မှာ “ဂျူလီယာက မလိမ်တ တ်ဖူး” ဆိုတဲ့အသံလေးက စွဲေ န တ ယ် … ချစ် မြိ ပီဆိုတော့လဲ ယုံတာပေါ့ေ နာ့ … သူ ဖုံးဆက်မယ့်အချိန် လေးကို … ထိုင် စောင့် နေတယ် … ညနေစောင်း တဲ့အထိ … ဖု န်းမဆက်ဘူး … ၆ နာ ရီလဲ ဖု န်း မ ဆက်သေးဘူး … ၇
နာ ရီလဲမလာ… ၈ နာရီ မှာလဲ မြ ကားရ သေး … ဒေါသကထွ က်လာတယ် … ဘာလဲကွာ … ဖု န်းဆက်မ ယ်ဆိုပြီးတော့… ငါ့ ကို ညာသွားတာပဲ … တောက် …
စိတ်တိုနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် … ဖုန်ြး မည်လာတယ် … အဟား … ကျနော် ပျော်သွားတယ် … ကျေ နာ် ပျော်သွားတယ် … အြ မန် ဖု န်းကောက်ကိုင်လိုက်တယ် …
“ဟယ်လို … သော်ဇင်လားဟ င်”
“ဟုတ် … ဟုတ် … ဟုတ်ပါ တယ်ခ င် ဗျ …”
“တို့ကို မှတ်မိလား ဟ င် …”
“ဂျူလီယာ …”
“အိုး … တကယ်မှတ်မိ တာပဲ … ဘယ်လိုသိ”
“သိတာပေါ့ … ဂျူလီယာ့အသံလေးကို နားထဲ စွဲနေတာ … မေ့လို့မ ရဘူး”
“အပိုတွေ … ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲ နဲ့”
“ဟုတ်ပါတ ယ် … တကယ်ြေ ပာတာပါ… ကျနော်က မြင်ြ မင် ချ င်း”
“ဟိုး … ဆရာ … နော က်မှ ပြော … သော်ဇ င်က ဘယ်မှာနေတာ လဲ”
“ကျနော်က … လမ်း ၄၀ မှာနေတာခင်ဗျ “
“ေ အာ် နီးနီးလေးပေါ့”
“နီးနီးလေး ပဲ … တ သက်လုံးနီး ရင် ပိုကောင်းမယ်ေ နာ်”
“ဟွန့် … တို့က ခ င်လို့ ဖုန်းဆက်တာနော်… အဲ ဒီလိုတွေ မပြောကြေး”
“ဆောရီး … ဒါပေမယ့်လဲ … ရင်ထဲမှာ …”
“ဟိုး … ဆရာ … ကျောင်းရော တက်နေသေးလား”
“သင်တန်းတွေပဲ တက်နေတယ် … ဂျူလီယာက ရော”
“အတူတူပဲ … ကျောင်းပြီးသွားပြီ … အင်္ဂ လိပ် စာ သ င်တ န်းပဲ တက်နေတာ “
“… သ ငတ် န်းမှာလေ “
“သိတယ် … ဘယ်အချိန် လဲဟင်”
“ဘာလုပ် မ လို့လဲ”
“လာစောင့်နေ မယ်လေ “
“ဘာလုပ် ဖို့ “
“တွေ့ချ င်လို့ေ ပါ့”
“အင်း … ၁၂ နာ ရီ ခွဲအတန်းဆင်းတယ်”
“အို ကေ …”
“ဒီဖု န်းကို ပြန် မဆ က်နဲ့ နော်… တို့ကပဲ ဆက်မယ် “
“နားလည်တယ်မှတ်လားဟင် … အိမ် က အရ မ်းပွားတ ယ်”
“ဘိုင့်ဘိုင့် … မနက်ြ ဖ န် စောင့်နေ မယ်နော်”
“အင်း အင်း “
သူ ဖု န်းချ သွားပေမယ့် … ကျနော်ဖုန်းကို ရွှတ်ကနဲ ဖက်န မ်းပစ် လိုက်တယ် … ကျနော် ပျော်ေ နတ ယ် … မနက်ြ ဖ န် သူနဲ့ တွေ့ရ အုံးမယ် … တကယ်ပါ … ကျနော် သူ့ကို ချစ်တယ် … လူမျိုးချ င်းမတူပေ မ ယ့်လဲ … ကျ နော်သူ့ရဲ့မျ က်လုံးလေးကို … ချ စ် တယ် … ရွှန်းလဲ့တော က်ပ နေတဲ့ … မျက်လုံးလေးကိုပေါ့… ကျနော်ယြုံ က ည်ပါတယ် … သူလဲ ကျ နော့်ကို ပြန် ချ စ် မယ်ဆိုတာ … ဒီလိုနဲ့… ကျနော် အိ ပ် ပျော်သွားတယ် …
မနက် ၈ နာရီ လောက်မှာ ကျနော် နိုးလာတယ် … ကျနော် အိပ် ချဉ် မူးတူးနဲ့ သွားတိုက်ရင်း စ ဉ်းစားတယ် … ၁၂ နာ ရီခွဲသ င်တ န်းဆင်းမှာ ဆိုတော့… သင်တန်းက ၉ နာ ရီလောက်တ က်ရတြာ ဖစ် မယ်ဗျ … နာ ရြီ က ည့်လိုက်တော့ ၈ နာ ရီကျော်နေပြီ … မ နက်စာ မစားတော့ဘူး … ရေ မိုးချိုး… ခပ်သွက်သွက် … အဝတ် အစားလဲြ ပီး … သူ သွားတက်မယ့် သင်တန်းအောက်မှာ … သွားစောင့် နေလိုက်တယ် … ၉ နာ ရီ တော့ မထိုးသေးဘူး … သင်တန်းလာတက်တဲ့ ကောင်မ လေးတွေ တော့ အမျာြး ကီးပဲ … ဟြို က ည့် ဒီကြည့်နဲ့ … ငေးကြည့်နေ တုန်း …
ဘေးကနေ တ ယောက်ြ ဖတ်သွားတယ် … သင်းသင်းလေးပဲ … သူ… ကျေ န်ာသြိ ပီ … အဲ ဒါ ဂျူလီယာ … ကျနော်လိုက်ြ က ည့်တာ ပေါ့ … ဒီနေ့ … သူ ဂါ ၀ န် ရှည် အြ ဖူေ ရာင် ၀ တ်လာတ ယ် … အဖြူရောင်ေ ပါ် မှာ … အမဲ အကွ က်လေးတွေ နဲ့ … လှတယ် … ရ င်နှ စ် မွှာ က … တင်းပြီး မို့ နေတာ ပဲ … ခါးလည်မှာ … ခါးပတ အ်မဲရောင် လေး စီး ထားတယ် … ကြိုက်တယ် … လွယ်အိတ်တော့မပါဘူး … စာအုပ် နှ စ်အု ပ်သုံးအုပ် ပဲ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတယ် … ကျောမှာ ဝဲနေတဲ့ ဆံပ င် ရှည်ေ တွက … တင် ပါးထိ ဖုံး အု ပ်ဆဲ … အနော ကက် တင်သားကတော့ြေ ပာနေ စရာ ကိုမလို ဘူး … တော်တော်တောင့် တယ်ဗျ … ဂါ ဝန် ရှည်ြ ကီးအောကမ်ှာ …
တင်းတင်းလေးနဲ့ကောက်နေတာ …ြေ ပြး ပီး နမ်း ပ စ်လိုက်ချင် တယ် … ဖျစ် ညှစ်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … ဂါဝ န်က အရှည်ဆိုေ ပမယ့် … သူ့ြေ ခသလုံးလေးတော့ ပေါ်ေ နတာပဲ … လှတယ် …ြေ ခသလုံးက သိပ် မတတ်ုဘူး …
မော်ဒယ်လုပ် ရ င် … နာမ ည်ြ ကီးအုံးမှာ … သတိရပြီ ဗျ … မော်ဒ ယ် ခ ရစ္စတီး နားလို ပုံ စံ မျိုး… ဟုတ်တယ် … ခရစ္စတီးနား က နဲ နဲ ဝတ ယ် … သူက နဲ နဲ ပိ န်တယ် … ဒါပဲကွာတယ် … တင်သားဆိုင် လေး … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့… သူ သင်တန်းထဲ မဝ င် ခင် … ဖျပ်ကနဲ … နော က်ကိုလှည့်ကြည့်တယ် … ကျနော် ရြီ ပလို က်မိတယ် … ချ စ်တယ် … ဂျူလီယာရယ် … သူလဲ … ပြန် ရီပြသွားတယ် … အိုကေ … စောင့်နေ ပါ့မ ယ်ဗျာ …
ဗိုက်ကနဲနဲဆာလာတယ် … ဟိုလျှောက် ဒီလျှော က် … ဟိုနားသွားကြ ည့်လိုက်နဲ့… အချိ န်ကလဲ ကုန် နို င် ခဲ တယ် … မတတ်နို င်ဘူးလေ … ချ စ် မိတဲ့သူဆိုတော့လဲ … စောင့်ရ မှာပေါ့ … နေ က ခြစ်ြ ခစ် တောက်ပူေ န တုန်း …
မိုးရွာချရင်ကောင်းမှာပဲ … အရမ်းအို က်တ ယ် … ချွေးတွေ တော င် စို့လာတယ် … ဟော … ၁၂ နာ ရီ ခွဲတော့မယ် … ဟော … သူ ဆင်းလာပြီ … သင်တန်းဆင်းလာတဲ့ ကောင်မ လေးတွေြ ကား ထဲမှာ … သူ့အလှက ထင်းနေတာ ပဲ … ကျနော့် ကို ပြုံြး ပတ ယ် … ကျနော် သူ့အနားကပ်သွားတယ် …
“မ နက်ကတည်းက စော င့် နေတာလား”
“ဟုတ်တယ် … တွေ့ချ င်လွန်းလို့ …”
“အခုတွေ့နြေ ပီ လေ … ဘာြေ ပာ မလို့လဲ … ပြော …”
ကျနော် စောင့် နေတာကို … သူ သဘောကျတဲ့ပုံ ပါပဲ … ကျနော်နေ ပူထဲမှာ စောင့်ရကျိုးန ပ် ပါတယ်… ဟော ကြည့် … အခုဆို သူလေးနဲ့ ကျနော် စကာြးေ ပာ ခွ င့် ရြ ပီ … လမ်းအတူတူ လျှောက်ခွ င့်ြ ပီ … သူ့လက်ထဲမှာ … အင်္ဂ လိပ် အဘိဓါ န် ခပ်ထူ ထူ တအုပ် ကိုင်ထားတ ယ် … ကျနောင် ကိုင်ပေး ချ င်တယ် …
“အဲ ဒီစာ အုပ် ကိုင်ပေးမယ် လေ … လေးနေ မှာ ပေါ့“
“အင်း … ရော့ …”
သူ့ပုံ စံက ဟန် ဆောင်မှု မ ရှိဘူး … ကျေ နာ် ကြိုက်တယ် … ရှက်ကိုးရှက်က န်း ဖြစ် မေ နဘူး … ပြုံးပြုံးလေး နဲ့ ကျနော် အလိုက်သိတာကို ကျေန ပ်နေတ့ဲပုံပဲ …
“ထမင်းရော စားပြီးြ ပီလား …”
“ဟင့်အင်း … မစားရသေးဘူး … ကျွေးမလို့လား”
“ဂျူလီယာက ကြက်သားပလာစာ စားမလားလို့ …”
“ကောင်းသားပဲ … ကျနော်လဲ ပလာတာ စားမယ်လေ …”
“ကျွေးမယလ်ို့လဲ မြေ ပာ မိ ပေါ င် …”
“ရ ပါ တ ယ်ဗျာ … စေတနာပေါ့ …”
“ဂျူလီယာက ကပ်ေ စး မ နဲ တ တ်ပါ ဘူးေ နာ် …”
“သိတာပေါ့ … သိပ်လှတဲ့ကောင် မလေးတွေ က … က ပ်ေ စး မ နဲ ဘူးဆိုတာ”
“တော်ကီကတော့ … ဟွန့်”
ဒိုင်းကနဲ မျ က်ေ စာ င်းလှလှလေး အထိုးခံ ရင်း … ကြက်သားပလာတာ ရောင်းတဲ့ဆိုင် ရောက်သွားရော … မျ က်နှာချင်း ဆိုင် ထိုင်ကြ တယ် … အစက … သူ့ဘေးမှာ ထိုင်မ လို့ပါ ပဲ … စ စချ င်းဆိုတော့ … မ ကောင်းဖူး ထင်လို့ အရှေ့ မှာ ထိုင်လိုက်တ ယ် … အရှေ့ မှာလဲ ကော င်းတာပဲ … သိပ်လှတဲ့မျက် နှာလေးကို … တစိမ့် စိ မ့်နဲ့ကြည့်ခွ င့် ရတယ် … ပြီးတော့ … တစိ မ့်စိ မ့်ကြွနေတဲ့ ရင်သားမို့ မို့ လေးကို င မ်းခွ င့် ရတယ် …
၀ိတ်တာရော ကလ်ာတော့ … ကြက်သားပလာတာ နှ စ်ပွဲ မှာလိုက်တယ် … ကျနော် အသားတွေ နွှာပေးတ ယ် … သူ ခ ပ်စားတယ် … ကျနော် အရမ်းပျော်တာပဲ … ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူကို … ယုယုယ ယနဲ့ … အတူတူ စားခွ င့် ရတာ… အရမ်းကြို က်တယ် … တသ က်လုံး စားဖူးသမျှ ပလာတာထဲ မှာ … ဒီတ ခါ အကောင်းဆုံးပဲ … ကျနော် ကြက်သား ဖတ်လေးကို … ခ ရင်း နဲ့ ထိုးပြီး … ဂျူလီယာ့ကို ခွံ့ေ ကျွးမိတယ် … အဟိ… သူ စားတယ်ဗျ … နှုတ်ခမ်းဖူး ဖူး လေးကို ဟ ပေးတယ် … ကျွ န်တော် ခွံ့ ကျွေးမိတယ် … ကျနော်ေ ပျာ်သွားတ ယ် …
“ဒါဆို … ကို့ကို ခွံ့ကျွေး …”
“ဟင့်အင်း … ကျွေးပါဘူး … ရှက်တယ် …”
သူ စားပြီး မှ … ရှက်သွားတယ် ထင်ပါ ရဲ့… မျက်နှာလေးက … နီ ရဲ တွ တ်သွားတ ယ် … အရမ်းလတှာပဲ … မျ က်ေ စာ င်းလေး … ဒိုင်း ကနဲ ထိုးတယ် … ခ ဏခ ဏထိုးတ ယ် … ဟင်းနော် … ဖက်နမ်း ပစ်လိုက်ရ … ပိုက်ဆံရှင်း ဖို့ ၀ိတ်တာ အနားရော က်လာလို့ … နို့ မို့ဆို … ဖက်န မ်းပ စ်လိုက်မိ မှာ … အမှ န် ပဲ … ကျနော်ပဲ … ပလာတာဖိုး ပေးလိုက်တယ် … သူပေးဖို့ ဟန်ြ ပင် သေးတယ် … ကျနော်အတင်းပေးလိုက်တယ် … သူ ဘာမှ မပြော ဘူး … ပလာ တာဆိုင်ထဲက ထွက်လာတော့ …
“ဂျူလီယာ … အိ မ်ပြန် တော့မှာလားဟင် …”
“သော်ဇ င် ရော …ြ ပန် တော့ မလို့လား …”
“ဟင့်အင်း မြ ပ န်သေးပါဘူး …”
“သင်တန်းနော က်တခု သွားရအုံးမယ် … လှည်းတန်းမှာ …”
“ေ အာ် … လိုက်ပို့ ပေးမ ယ်လေ …”
“အင်း …ြ ပီးရော … ဟော … ဟိုမှာ … ဘတ်စ်ကားလာနြေ ပီ … တက် … တက် …”
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ … ဘတ်စ်ကားက … မီးပွို င့် မှာ ရပ်တ ယ် … သူက အေ ရှ့ကတက်တယ် … ကျနော်က … အနောက်က တက်တ ယ် … ကားက တော်တောာ်ကြပ်တာပဲ … အတင်းတိုး ၀ င်သွားမှ … နေ ရာရတ ယ် … ဂျူလီယာက … အရှေ့မှာ ရ ပ် … ကျနော်က နော က်မှာ ရ ပ်မိတ ယ် … သိပ်လှတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို … လက်ဖောက်ပြန်ခံ ရ မှာြေ ကာ က်တယ် … ကိုယ်ပဲ တာဝန်ယူလိုက်မယ် … တာဝန်ယူရ မှာပေါ့ … ဟုတ်တယ်ဟုတ် … ကြ ပ်တ ယ်ဗျာ … တော်တော်ကြပ်တယ် … မီးပွိုင့် စိ မ်း သွားတော့ … ကားက ဝူးကနဲ ထွက်တယ် … ခရီးသည်တွေ အကုန် လုံး ယိုင်ကုန် တယ် … ကျနော်… သူ့ခါးလေးကို … ယောင်ြ ပီးဖက်မိတယ် … လက်တဖကပ်ဲ အားတယ်ဗျ … တဖက်က … စာအု ပ် ကိုင်ထားတော့ … ဆွဲမိဆွဲ ရာ … ဖက်လိုက်မိတ ယ် … အွ န့် ကနဲ အသံလေး ထွက်လာတယ် … တင်သားဆိုင် မာမာ အိ အိလေးကို ကျနော့် ဟာနဲ့ ကပ်ထားသလိုဖြစ်သွားရော … ခါးကိုလဲ ဖက်ထားလိုက်သေးတယ် … သူ လှည့်ြ က ည့်ချင် တယ် … မျ က်နှာ လေးလှည့်လာတယ် … ကျနော် လက်ကို အြ မန် ရုတ်ဖို့ အော က်ကို လျောလိုက်တယ် … လက်က ရုတ် လို့မရဘူးဗျ … ဘေးမှာ လူတွေက ကြပ်ညက်ေ နတာပဲ … ကျနော်လေ … ရ င်တွေ တ အားခုန် တာပဲ … ချ စ် ရသူလေးရဲ့အပျို စ စ် စစ် … တင်ပါးဆိုင်လေးကို ဖိကပ် ထားရင်း … ခါးသိမ်သိမ် လေးကို ဖက် ထားရတာ… တမျိုးပဲ ဗျာ … တ မျိုးပဲ … ကျနော့်စိတ် တွေြ ကွတက်လာတ ယ် … သူ့အရပ် က ကျနော့် ထက်နဲ နဲတော့ နိ မ့်တယ် … ကျနော့်ရ င် ခွ င်ထဲ …
ကျောမှီေ န သ လိုဖြစ်ေ နတာပေါ့ … ခ ပ်သ င်းသင်း အပျို နံ့လေးကလဲ… ကျနော့်နှာခေါင်း ကို တအားဒုက္ခပေးတယ်ဗျာ … ကျနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ … ကျနော့်ညီလေးက လဲ … ဒုက္ခ …
တဖြေြးေ ဖးထောင်လာတယ် … တော်သေးတယ် … ဂျ င်းဘောင်းဘီ ဝတ်လာလို့ … ဒါ ပေ မယ့် သူ သိတယ်ထင် ပါရဲ့… သူ … အေ နာက်ကနေ အထောက်ခံထားရတာကိုရှောင်ဖို့ ကြိုးစားတ ယ် … မရ ဘူး … ကားကကြ ပ်နေတာကိုး … လှုပ်လို့မှ မရတာ … ကျနော် သူ့အနားကို တိုးတိုးလေး … ကပ်ြေ ပာ မတိယ …်
“ဆောရီး ပါဗျာ… တမင်သက်သ က်လုပ်တာမဟုတ်ပါ ဘူး …”
“အင်း … ရပါတယ …”်
အသံလေးက တိုးတိုးလေး … ကျနော့်ကို မော့ြ ပီးသမင်လည် ပြန်လေး ပြန်ြေ ပာတယ် … ကျနော့်ပါး နဲ့ သူ့ပါး နဲ့ ကပ်တော့မ ယ် … နဲ နဲလေးပဲ လိုတယ် …ြ က က်သီးတွေ တ ဖြ န်ြး ဖ န်း ထ သွားတ ယ် … သူလဲ ကြက်သီးတွေ ထလာတယ် … ကျနော်လက်လေးက … တခုခု ကို ဖိ မိထားတ ယ်ဗျ … အရ မ်း နူးညံ့တဲ့ ခပ် မို့ မို့အရာလေးပေါ့… သိပ်လှတဲ့ ပေါင်တံကျစ် ကျစ်လေး မ ဟုတ်တာတော့ … ကျနော်သိတ ယ် … ကျနော့်လက်တွေ ခွာလို့မ ရဘူး … ကျနော် အဲ ဒါ လေးကို ဖိထားမိတယ် … သူ မျ က်နှာတွေ ရဲ တက်လာသလိုပဲ … ကျနော့် တကိုယ်လုံးလဲပူလာတယ် … ကျနော့် ညီလေးက … ဇတ်ဇတ်တုန် အော င် … ခေါင်း ထောင် ထလာတယ် … သူ … ကျနော့်ရင် ခွ င်ကို ပိုပြီး မှီလာသလိုပဲ … ကျနော် အလိုက်သင့်လေး ဒီလိုပဲ ဖက်ထားရင်း … လက်က စားမိတယ်…
သူ အတင်း ပဲ လက်ကို လာကိုင်တယ်… အမှ န်က ဆွဲ ဖယ်ပစ်တာ… ကျနော် က ပြို ပီး ဖိထားလိုက်မိတယ် … ကျနော့်ကော င် မလေးက အိုးတော်တော်တောင့် တယ်ဗျ … အေ ရှ့က အဖုတ်လေးက လဲ ခုံးထနေတာပဲ … မာ မာ အိအိ လေး… ကျနော် … ခ ပ်ဖွ ဖွ လေး ပွ တ်ပစ်လိုက်တယ် … သူ မေ န တ တ်ဘူး … ဖင်ကောက်ကောက်လေးက တုံကနဲ … တုံကနဲ နော က်ကို ကော့ကော့ပေး တယ် … အပျိုလေးဆိုတော့ …
အထိအတွေ့က ကြ က်သီးထစရြာ ဖစ်နေမှာ ပေါ့ … လ ည်တိုင်လေးကို နော က်လှည့်ပြီး … ကျနော့်ကို ခပ်တိုးတိုးလေး … ပြောတယ် …
“မလုပ် နဲ့လေ … လူတွေ နဲ့ …”
“ဂျူလီယာ ကို့ကို ချ စ်တယမ်ှတ်လားဟင် …”
“အွ န် … သော်ဇင် နော် …”
ဂါ ဝန် ရှည်ပေါ်ကနေ … ဂျူလီယာ့အဖု တ်လေးကို … ကိုင်ရတာ … အရ မ်း မိုက်တယ်ဗျာ … တင်းပြီး မို့ ဖော င်းေ နတဲ့ … အဖုတ်လေးကို ပြို ပီး နှိုက်လိုက်တယ် … သိပ်တော့ နှိုက်လို့မ ရဘူးပေါ့ … အလယ်အကွြဲေ ကာင်းနေရာ လေးကို … မှ န်းပြီး ပွ တ်ပွ တ်ပေး တယ် … ကျနော်လဲ ထော င်ေ နြ ပီ … သူ့ဖ င်ကို အတင်းဖိကပ် ထားပြီး …
ပွ တ်ပေးတဲ့အရသာက … အရ မ်း မိုက်တယ်ဗျာ … ဖီးလ်အရမ်း တက်တယ် … သူ့အဖုတ်လေးကို နှိုက်နေတဲ့ ကျနော့်လက်ကို အတင်း ပဲ … ဆုပ်ကိုင် ထား တယ် … ကားကလဲ အရ မ်းမောင်း တော့ … မိုက်တယ် … နော က်ကနေ … သူ့ ဖင် လေးထဲကို … ကျနော့်ဟာနဲ့ဆော င့်ဆောင့်ပေးတယ် … အရှေ့ရောအနောက် ရော … တိုက်စ စ်ဆင်ခံ ရတော့ … သူ ဘယ်ခံ နို င်မလဲ … အထိအတွေ့မှာ မျောသွားတာ ပေါ့ …
ဆတ်ကနဲ ကော့ပြီး … နောက်ကို တင် ပါးလေးကို … ပ စ်ပ စ် ပေးတယ် … ကျနော်ကလဲ နော က်ကနေ ညှောင့် ပေး တယ် … သူ ဖီးလ်အရမ်း တက်နေတဲ့ပုံပဲ … ကျနော့် လက်ကို သူ အတ င်း လာကိုင်တယ် …
ကျနော်ကလဲ ပေါ်တ င်ပဲ … မိထားတဲ့ … အဖုတ်လေးကို … လွှတ်ကို မလွှတ်တော့ဘူး …
ဝလုံးလေးေ တွ ရေးလိုက် … ကကြီးလေးတွေ ရေးလိုက်နဲ့… သူ့ကိုယ်လုံးလေးက လိမ်တွန့်လာတယ် … ကျနော်လဲ ဖီးလ်တ အားတ က်တယ်ဗျာ… အိုးကောင်းတဲ့ ကုလားမလေးကို … လူကြားထဲ နှိုက် ရတဲ့ ဖီး လ်က အရမ်းတက်တာပဲ … ကျေ န်ာလဲ ချစ် တာပါတာပေါ့နော့ … မျ က်နှာ ရှေ့ရောက်နေတဲ့ … သူ့ပါးပြ င် လေးနားကို ကပ်ပြီး … တိုးတိုးလေး … ကျနော် ပြောမိတယ် …
“ဟင့် … သော်ဇ င် နော်…”
“တို့ကို ချ စ် လားဟင် …”
ရဲ ရဲ နီတက်လာတဲ့ … နား ရွက်ဖြူ လေးကို … ကျနော် ကိုက်ခဲ ထားပစ်လိုက်ချ င်တယ် … ချ စ် ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ … ခ ပ်သင်းသ င်းရေမွှေးနံ့ လေးရယ် … ကိုယ်သင်းရနံ့လေးရယ် … ကြ က်သီးတွေ ဖြန်းြ ဖ န်းထနေတ့ဲ … လည်ဂုတ်သားလေးရယ်… ကျနော်အရ မ်း ချ စ်တာပဲ … ကျ နော်သူ့ကိုချ စ် တယ် … ကျနော် သူ့ကို ပို င်ဆိုင် ချင် တယ် … ခပ် ဖွ ဖွလေး နှို က်နေတဲ့ … သူ့အဖုတ်လေးက … အစွ မ်းကုန် မာြ ပီးဖော င်းမို့ နေတာပဲ … အရည်တွေလဲ စိုလာတယ် … သူ တချက်… ညွတ်ကနဲ ခွေ သွားတယ် … ကျနော် ခါး ကို ဖက်ထားပ စ်လိုက်ရင်း … သူ့ကို ထိန်းထားမိတယ် …
ကျနော် သိလိုက်ပြီ … သူြ ပီး သွားလို့ … အားကုန်သွားတာလား … ဒူးချောင်သွားတာ လား … ကားက ပုံမှ န် ပဲ မော င်း နေတာပဲ လေ … သေချာတာ ပေါ့… ပေါင် နှစ်ချောင်းကြားက အရည် တွေ ပိုစိုလာသ လိုပဲ … ပူ လာတယ် …
ကျနော် သိလိုက်ပြီ … ဂျူလီယာ ပြီး သွားပြီ … ထွာဆိုင်ခါးေ လးကို ဖက် ထားရင်း … ကျနော်သူ့ကို ပြန်မလွှတ်တော့ဘူး … သူလဲ မ ရုန်း ဘူး … ကျနော့်ကို မှီထားတယ် … ဘေးကလူတွေြ က ည့်ရင် တော့ … ကျနော်တို့က … သိပ် ချစ် တဲ့ သမီးရီးစားတွေ ပေါ့ နော့… ကျနော် နဲ့သူနဲ့ပူးကပ် နေတု န်းပဲ … ကျနော်ကတော့ ဖီးလ်တက်ေ နတုန်း ပဲ … လူတွေ သာမရှိ ရင် … ဂျူလီယာ့ကို … ဒီဘက်ဆွဲလှည့်ြ ပီး … အန မ်းတွေ ကြမ်းကြမ်းပြေး ပီး … တကိုယ်လုံးကို … နမ်းပစ်လို က်ချ င်တယ် …ြ ပီး တော့ … မြာ ပီးတ င်း မို့ နေတဲ့ …
အဖုတ်လေးကို … ဟောဒီလို … ဆောင့်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … စိ တ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့က ထပ်တူမကျသေးေ ပမယ့် … ကျနော်တကယ်ပဲ ခပ်ြ ပင်းြ ပ င်း လေး… ဆောင့် ပစ်လိုက်မိ တယ် … သူ တုန်တက်သွားတယ် … ကျနော် သတိလွတ်တော့မလို့ … ကံကောင်း တယ် … သူ့ခါးလေးကို အတင်း ဖက်ထားပြီး … နောက်တချက် ဆောင့် ပစ်လို က်တယ် …
“လှည်းတန်း … ရော က်ပြီ … ဆင်းမယ့် လူတွေ အေ ပါက်ဝကို ထွက်ထားပါ … မဆ င်းသေး တဲ့လူတွေ … နေရာလဲေ ပး ပါ …”
တောက် … ဖီးလ်တက်တော့မှ … လှည်းတ န်းရော က်ြ ပီတဲ့ … ဒီလိုပဲ တိုးခွြေ့ ပီး … ဘက်စ်ကားအော က်ကို ဆင်းလာ ခဲ့တယ် … ဆင်းတဲ့လူတွေ က တော်တော်များသား … ကျနော် အောက်ရော က်တော့ … သူက အရှေ့က နေ သုတ်သုတ်နဲ့ … လျှော က်ေ နြ ပီ … ဂျူလီယာ ရှက်များသွားလားမသိ … ကျနော်အနောက်ကနေ အြေ ပးတ ပိုင်းနဲ့ လိုက်ခဲ့ မိ တယ် … သင်တန်း နားေ ရာ က်တော့ … သူ ကျနော့်ကို လှည့်ကြ ည့်ပြီး …
“သော်ဇ င်က … ဘာလို့အဲ ဒီလိုလုပ် တာလဲ …”
ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်ြ ပီး … ခပ်တည်တည်နဲ့မေးလိုက်တော့ … ကျနော် နဲ နဲ တော့ လန့်သွားတာပေါ့ … ဒါပေမယ့်လဲ … ခပ်တည်တည်ပဲြ ပန်ဖြေလိုက်တယ် …
“ဂျူလီယာ့ကို ချစ်လို့ …”
“ချ စ်တိုင်းလုပ်စရာလား …”
“ချ စ်လို့ … ကိုင် မိတာပါဆို … စိတ်ဆိုးလား…”
“ဆိုးရင် … ဖ က်န မ်း မှာ …”
“ဟာကွာ … သော်ဇ င်နော်… တော်တော်ဆိုး …”
“တို့ကို ချ စ် တ ယ်မှတ်လား …”
“မလွှတ်ဘူး … ချ စ်တယေ်ြ ပာမှ … လွှတ်ေ ပး မယ် …”
“ဟေ့ေ အး … စ ဉ်း စားအုံးမယ်”
လက်ဆွဲထားတဲ့ … ကျနော့်လက်ကို အတင်းရု န်းြ ပီး … သင်တန်းေ ပ်ါတက်သွားပါလေေ ရာ … နေအုံးပေါ့ … အြ ပန်ကျရင်တွေ့မယ် … သိမ့်သိမ့်ခါ တ က်သွားတဲ့ တင်သားတွေကို … ကျနော် တမေ့ တ မော ငြေး ကည့်ပြီး … ကြိမ်းဝါး မိတ ယ် … အရမ်းချစ်တယ် … ဂျူလီယာရယ် …
ဟိုငေးဒီ ငေး နဲ့ …ြ ဖတ်သွားသမျှ … ကောင်မ လေးတွေ ကို ငမ်းြ ပီး … ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ထဲမှာြေ ပာနေ မိတ ယ် … ဟိုစော် လေးက … အိုးသေးလိုက်တာ … ဒီဆော်လေးက … အိုးကားတယ် … ဒီစော်လေးက အိုး ကျစ်တ ယ် … ဟာ … ဒီဆော်ြ ကီးအိုး … တုန်တုန်ြ ပီးခါ ခါ သွားတယ …်အံ မ ယ် … ဟိုစော်ငယ်ငယ်လေးက … အိုးသေး သေးလေးကို … ခြါ ပီးလျှောက်တယ် … ပဲ များလိုက်တာကွာ… ခေါ်ပြီး … တချီလောက်ဖိလိုက်လို့ကတော့ … တအားအော်နေ မှာပဲ … ကြည့်ပါအုံး … ဒီအတွဲကိုလဲ … စော်ကို ခါးလည်ကနေဖက်ထားတဲ့လက်က … လူလစ်ရ င် … မနှိုက်ဘူးဆို ကြိုက်သလိြုေ ပာ … စော်လေးကလဲ … အပေး ကောင်းမယ့် ပုံပဲ … မိုက်တယ်ကွာ … ဟိုလြူ ကီးလဲ ဘာ ထူးလဲ … ဘေးက စော်လေးက ငယ်င ယ်လေး … လက်ချင်း ချိ တ်လျှော က်သွားတာများ … တလောက လုံး … သူတို့နှ စ် ယော က်ပဲ … ရှိ နေလားမသိဘူး … ဒီလိုနဲ့လှည်းတန်းမှာ … အိုးသုတေ သန ထိုင် လုပ်နေတာ… အချ န် ၂ နာရီ … ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်း မသိ … သင်တန်းေ အာက်ကို … အများကြီးဆင်းလာမှ သတိရ မိတယ် … ငါ ပိုင် ဆိုင် ရမယ့် … အိုးလေး … ဆင်းလာ တော့မယ် …
ကျနော် ဂျူလီယာ့ ကိုြ ကိုက်တ ယ် … စားရရင်ြ ပီးရော ဒီသဘော မဟုတ်ပါဘူး … တက ယ်ချစ်တာပါ … ပို င်ဆိုင် ချင် တယ် … ကျနော်သူ့ကိုချ စ်တ ယ် … သူ့အိုးလဲ မိုက်တာပဲ … ဂျူလီယာက တော င့်တ ယ် … ကားတယ် … ကျစ်တ ယ် … ကျနော် နှိုက်ြ ပြီး ပီ … အဖုတ်လေးက … ဖောင်းြ ပီး မို့ နေတာများ … တင်းနေတာပဲ … ကျနော် သိတယ် … အဲ ဒီလို အဖု တ်မျိုးက … အောက်ပေးအရမ်း ကောင်းတာ … အေ ပ်ါကေ န တဇတ်ဇတ်နဲ သ့ာ ဆောင့် … အောက်က နေ ကော့ကော့ေ ပးမ ယ့်ပုံ မျိုး… အရ မ်း မိုက်တယ် … နောက်ကနေ ဆော်အုံးမလား … ခါးလေးခွ က်ြ ပီး … နော က်ကို ကော့တင်ထားပေး မယ့် … ပုံစံ မျိုး… ကျနော်ကတော့ … သူက ကျနော့်ကို ပြန်ချ စ် မယ်လို့ ထင်တာပဲ … စ ဉ်းစာြး ကည့်လေ … ကားပေါ် မှာ အနှိုက်ခံ ရ တာတောင် … စိတ်ဆိုးတဲ့ ဟန်ပန် မျိုးမ တွေ့ရဘူး … ကလက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး … ချ စ်လို့ အလိုလိုက်တာလို့ ယုံကြည်တယ် … ဟော … ဆင်းလာ ပါပြီ ဗျာ … ကျနော့်ရဲ့ဂျူလီယာလေး … မျက်နှာလေး က ပန်းသွေးရောင် လွှမ်း နေတယ် … ကျနော့်စိတ် ပဲ ထင်လို့လားမသိဘူး … သူ့အြ ပုံးတွေ က … ပြို ပီး နူးညံ့လာသလိုပဲ …
“သင်တန်းြ ပီးသွားပြီလား …”
“အအေးသောက်အုံး မလား …”
“အင်း … သောက်မယ်လေ … “
“စာအု ပ် တွေပေးလေ …”
“အင်း ရော့ ”
သူ့လက်ထဲက … စာအု ပ် တွေ ကို လှမ်းယူပြီး … သူ့လက်ကလေးကိုပါ … ဆုပ်ကို င်ထားမိတယ်… အပို င် ပဲ …
ကျနော် သူ့ကိုချ စ်တယ် … သူ့လက်က လေးကို ဆွဲပြီး … တကမ္ဘာလုံး ပတ်လိုက်ချ င် ရဲ့…
သူ အသံလေးထွက်လာတယ် … ရှက်လို့နဲ့တူပါ တယ် … လက်က လေးကို ရု န်းမိတ ယ် … ဘယ်ရမလဲ …
ကျနော်ကလဲ မလွှတ်နို င်ပေါင် … သင်တန်း … ဒီဘက်နားက … ကော်ဖီဆိုင် လေးကို … ကျနော်တို့ အတူလျှောက်လာမိတယ် … လူကြားထဲမှာ … မ သိမသာ သူရု န်းတ ယ် … မျ က်နှာ လေးက ရဲ ရဲ တွ တ် နီတ က်လာတယ် …
“သော်ဇ င် နော်… “
“ချ စ်တယ်ကွာ …”
“ချ စ်တယ်ြေ ပာမှ လွှတ်မ ယ် …”
ကျနော်ကလဲ ဇွ တ် … အြေ ဖမပေး မချ င်း မလွှတ်ချ င်ဘူး … သူကလဲ ချ စ်တော့ချ စ်မှာ ပါ … အြေ ဖပေးရတာ ရှက်လို့နဲ့ တူတယ် … ခပ် တင်းတင်းေ လး ဆုပ်ကိုင် ထားရင်း … ကျနော်သူ့ကို စိုက်ကြည့်မိတယ် … သူ ဝင့်ဝ င့် စားစားလေးပြန်ြ က ည့်တယ် … ကျနော် မျ က်စိ မှိတ်ပြလိုက်မိတယ် … သူ လျှာ လေးပြန်ထုတ်ပြတယ် … ဒါပဲ လေ … ကျနော်နဲ့သူနဲ့… ချစ်သြူ ဖ စ်သွားကြပြီ … လူမျိုးချ င်းမတူ ပေ မယ့် … ကျနော်နဲ့သူနဲ့ချစ် တယ် …
ကျနော့်အချစ်ကို သူ ယုံကြ ည်မယ်လို့ ထ င် ပါ တယ် … ကျနော် ပျော်လိုက်တာဗျာ … အြေ ဖ ရပြီဆို တော့ လက်မလွှတ်နို င်ပေါ င် … ပြို ပီးတော့ ဆုပ်ကို င်ထားမိတယ် … ကော်ဖီဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ … လူေ တွက အများကြီးပဲ … ၀ို င်းတော်တော်များများပြည့်နေတ ယ် …
“ကော်ဖီဆိုင် က လူများ မ ယ်နဲ့ တူတယ်ေ နာ် …”
“အင်း … ကန် ဘောင်မှာ သွားထိုင် မလား …”
ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူြး ပီး …ြ ပည်လမ်းအတိုင်း … လျှော က်ကြတ ယ် …
“ဂျူလီယာ … ကို့ကို ချစ် လားဟင် …”
“သူ့ကိုသူ … ကိုတ့ဲ … အဟိ “
“ကို မခေါ် ချ င်လဲ မောင်ခေါ် လေ …”
“မ ခေါ် ပါဘူး … နှာဘူးလို့ပဲ ခေါ်မယ် …”
“အဟိ … ချ စ် ရင် စိတ်မဆိုးရဘူးနော် … နှာဘူး”
“ဟေ့ … ဟေ့ … တိုးတိုးခေါ် ပါဟ … လူကြားထဲ”
“အံ မယ် … သူလဲ လူကြားထဲ … လုပ် တုန်းကလုပ်ြ ပီးတော့ “
“ဒါကတော့ ချစ်လို့ “
“ချ စ်တာရော ဟုတ်လို့လား … သိပ်ဆိုးတယ်ေ နာ်”
“ကြို က်လားဟင် …”
“သော်ဇ င် နော်… ပါးချ ခံ ရ မယ် … ဟွန့်”
မျ က်ေ စာ င်းလေးထိုးလိုက်… ချ စ်တ ယ်ြေ ပာလိုက်နဲ့… မထိတတိ စ ရင်း … ကျနော့် စိတ်တွေ တဖြေြးေ ဖြး ကွလာတယ် … က န်ဘော င်ရော က်တော့ … ပန်ြး ခံထဲမှာ ပဲ သွားထိုင် ချင်တ ယ် … မနေတတ်တော့ဘူး ဗျာ… သူ့တကိုယ်လုံးကို ဖက် ထားချ င်တ ယ် … စိတ်ထဲမှာ … မ ရိုးမရွ နဲ့… တ ကယ်ပါပဲ … အခု ချက်ြ ခင်း … အကျ င်္ီတွေချွတ်ြ ပီး … ချစ် ပ စ်လိုက်ချ င်တယ်ဗျာ … စိတ်ကို တော်တော်ထိန်းထားရတယ် … ပန်းခြံထဲေ ရာက်တော့… လူသိပ် မရှိဘူးဗျ … ဒါနဲ့ပဲ … ပန်းြ ခံ ဒေါင့် က ထိုင် ခုံ လေးမှာ ထိုင် လိုက်မိတယ်… ထိင် မိတ ယ်ဆိုတာနဲ့… ကျနော်သူ့ပခုံးလေးကို ဖက်ထားပစ် လိုက်တယ် … ရုန်းတာပေါ့ … ရှက်မှာပေါ့ …
မရဘူးလေ … ဒီကလဲ … စိတ်ကကြွနေပြီ … တအားဖက်ထားပစ်လိုက်ပြီး … သူ့နှ ဖူးလေးကို န မ်းပစ် လိုက်တယ်
… ရွှတ် …
“ကိုနော် … တော်တော်ဆိုး”
သိပ် ချ စ်တာပဲ … ဂျူလီ ယာရယ် … ခ ပ်တင်းတ င်းလေး ဖက်ထား ရင်း … ကျနော် သူ့ကို န မ်းလိုက်မိတယ် … ကိုေ န်ာတဲ့ … အဟိ … ဝမ်း သာလိုက်တာကွာ … ကျနော့်ရ င် ဘတ်ကို လက်သီးဆုပ် လေးနဲ့ ထုတယ် … ကျနော် ထပ်နမ်းမလို့ ဟန်ြ ပင် တော့ … သူ ခေါ င်းလေး ဝှက်ြ ပီး … ရ င် ခွ င် ထဲကို … တိုးဝင်လာတ ယ် … ကျနော် ဖက်ထားမိတယ် … လက်ေ မာ င်းသားလေးကို … ဖွ ဖွ လေးပွ တ်သပ် ပစ်လို က်မိတ ယ် …
“ချ စ်တယ် … ဂျူလီယာရယ်…”
“တကယ်ြေ ပာ တာလားဟင် …”
“ဟုတ်လို့လား … တို့ကို အတည်ယူမှာလား…”
ကျနော် ချက်ခြင်းပဲ အြေ ဖပေးလိုကမိ တယ် … ဟုတ်တယ် … ကျနော် သူ့ကို ယူမယ် … လက်ထပ်မယ် … ကလေးတွေအများကြီးေ မွးပ စ် မယ် … ကျနော်သူ့ကို တကယ်ပဲ ချစ် မိသွားတ ယ် …
“တို့ကတော့ … မယူဘူးေ နာ် …”
“အန် … နောက်တာလား …”
“မ စနဲ့ကွာ … ရွှတ်…”
“အွ န် …”
လျှာလေးထုတ်ပြပြီး … လှောင်ြေ ပာင်ြ ပတဲ့ သူ့နှုတ်ခ မ်းလေးကို … ဖိ နမ်း ပ စ် လိုက်တယ် … သူ ရုန်းတ ယ် … မရဘူးလေ … ကျနော် သူ့ကို အတ င်းဖက်ထားရ င်း … ဖိ နမ်းပစ်လိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်း လေးက ပါး လွ န်းတယ် … ကျနော် ဖိ နမ်းထားရင်း … လျှာကို … နှုတ်ခ မ်းပါးနှုတ်ခုကြားထဲ ထိုးထည့်ပ စ်လိုက်တယ် … သူတားတယ် … နှုတ်ခမ်းပါး လေးနှစ် ခုကို အတင်းပဲ စိ ထားတယ် … ဘယ်ရမလဲ … ဒီကလဲ … နှုတ်ခမ်းနှ စ်လွှာကြားကို လျှာနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲ စုပ်ကြ ည့်လိုက် … လက်က လဲ ပေါင် လေးကို ပွ တ်သ ပ်ေ ပး မိတယ် … အန မ်းက အရှိ န်တက်လာတော့ … သူ့ပါးစပ် လေး ဟသွားတယ် … ကျနော့်လျှာလေး တိုးဝင်သွာြး ပီး … သူ့ရဲ့ လျှာ ဖျားလေးနဲ့ … ထိတွေ့မိတ်ဆ က်မိတယ် … ဆတ်ကနဲ သူ တုန်တ က်သွားတယ် … ချ စ်တယ် … ဂျူလီယာရယ် … မျက်စိ လေးကိုမှိတ်ြ ပီး … သူ ငြိ မ်ကျသွားတယ် … ကျနော်တို့ နမ်းကြ တ ယ် … ဘယ်လောက်တော င် ကြာ သွားတယ်မသိဘူး … ဘေးကြ ဖတ်သွားတဲ့ အတွဲက … အဟမ်း အဟမ်းချောင်းဆိုးမှ … ကျနော်တို့ အလန့် တကြား … အနမ်း ခွာသွားမိတယ် … သူ ရှက်လွန်းလို …့မျက်နှာလေးက နီရဲ တွ တ်နေတာ ပဲ … ခေါင်း လေးငုံြ့ ပီး ရှက် သွေြး ဖာ နေ ပုံ လေးကို … ကျနော် ချ စ် တယ် … မျက်နှာ တွေပူနေလို့လားမသိ …
နှ ဖူးလေးမှာ ချွေးလေးတွေတောင် စို့ တက်လာတယ် … ကျနော် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ သုတ်ေ ပးေ နတဲ့ အချိန် မှာ … အင်း ယားက န်က … လေနု အေးကဝှေ့ကနဲ တိုက်ခတ်သွားတယ် … သူလဲ သဘောကျတယ်ထင်ပါ ရဲ့… ကျနော် သူ့ကိုြ ပန်ြ ပီး ဖက်ထားလိုက်မိတယ် … သူက လဲ ကျနော့်ရင် ခွ င် ထဲမှာ မှီထားတ ယ် …
“ကိုက … မိ န်းမ တော့မ ရှိဘူး မှတ်လား …”
“အာ … ရီး စားတော င် ဒီေ န့မှရတာ …”
“အပိုတွေ … ဘ ယ်သူက သူ့ရီး စားလို့ြေ ပာလို့လဲ …”
“အွ န် … အခု ပဲ နမ်းြ ပီးြ ပီ လေ …”
“န မ်းြ ပီးတိုင်း ရီး စားလို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ”
“သေပြီဆ ရာ … ရီးစားမဟုတ်ရ င် … ဘာလဲ …”
ကျနော် နဲ နဲတော့ နှာ တ င်းသွားတယ် … ချ စ်တာလဲချစ်တာပေါ့ … စတာလဲစ တာပေါ့ … လက်ဆြွဲ ပီး လမ်းလျှောက်ြ ပီးြ ပီ … ပ န်းြ ခံထဲမှာလဲ န မ်းြ ပီးသွားပြီ … ဒါတော င် ရီးစားမဟု တ်ဘူးတဲ့ … ဘာလဲ ဟ …
“ချ စ်သူလေ … ချ စ်သူ … ခိ “
ဟုတ်သားပဲ … သူ ပြော တော့လဲ ဟုတ်သားပဲ … ရီးစားမဟုတ်ဘူး … ချ စ် သူတဲ့ … တ ဘဝစာ ချ စ်ြ က မယ်ပေါ့ … ရှေ့ ခ ရီး အတွ က် လက်တွဲ ကြ မယ်ပေါ့… ကျနော်ကျေနပ်သွားတ ယ် … ဟားခနဲခေါ င်းမေြာ့ ပီး … အားရပါးရ
ရီလိုက်မိတယ် … သူလဲ တ ခိခိ နဲ့ရီတယ် … ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူ့စ ရိုက်ကို … ကျ နော်
အရမ်းသဘောကျမိတယ် … မိ န်းကလေးဆိုပေ မယ့် … ပဲ မ များဘူး … ကျနော်ြ ကိုက်တယ် … သဘောကျလွန်းလို့ … နောက်တ ခါ တအားဖက်ပ စ်လိုက်တယ် …
“ချ စ်သူတဲ့ကွ … ဟား ဟား …”
“ခိ ခိ … အွ န် …”
ခိုးခိုး ခ စ် ခစ် ရီ မောနေတဲ့ … သူ့နှုတ်ခမ်း လွှာ လေးကို … ဖိ နမ်း ပ စ် လိုက်တယ် … ဒီတခါတော့ အနမ်းတွေက ပြို ပီးချိုြ မနေတ ယ် … စိတ်တွေ က ပြို ပီးြ ကွလာတယ် … ကျနော့်လက်တွေ က … သူ့ခါးလေးကို ဖက်ထားမိတယ် … လက်တ ဖက်က … ဂါဝ န် ဖုံး ထားတဲ့ပေါ င် လေးကို … အစု န် အဆန် … ပွ တ်သပ်လိုက်တယ် … လူရှင်းတယ်လေ … ဒီတော့ အန မ်း တွေြေ ခွ မတိာ ပေါ့ … ကျနော့်နားထဲြ ကားနေရတယ်… ရင်ခု န်သံတွေ တဒိန်းဒိ န်းနဲ့ … ကျနော်နဲ့သူနဲ့… တ အားနမ်း မတိယ် … သူ ကျနော့်ကို ဖက်ထားတယ် … ကျနော့်လက်လေးက … တဖြေး ဖြေးနဲ့ ပေါ င် အပေါ်ပို င်းကို … ရွေ့လာတယ် … ကျနော့် လက်က ပေါ င် ရင်း နား ရောက်သွားချန်ိမှာ … သူအလန့်တကြား … ရုန်းတ ယ် …
“ဟေ့ေ အးနော် … ပ န်းခြံ ထဲမှာ ကိုင်နဲ့ကွာ … “
“ကိုင်ချ င်တ ယ် … ချ စ်သူရယ် …”
သူ ကျနော့်ကို ရွှ န်းရွှ န်း စားစားလေးစိုက်ကြည့်တယ် … ကျနော့်နဖူးကို လက်သီးဆုပ် လေးနဲ့ တ ချ က်ထြု ပီး …
ဟိုဘက်ကို လှည့်သွားတ ယ် … သူ ရှ က်မှာပေါ့ … သူ့ခါးကို ဖ က်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်က အေ ပါ် ကို ဖြေးြေ ဖးလေး တက်လာပြီး … ဂျို င်းေ အာ က်ကနေ … ရ င်သားမို့မို့ လေးကို ထိလိုက်မိတယ် … ဟုတ်တယ်လေ … ပေါ င်ကြားထဲကို နှိုက်လို့မှမရတာ … ရတာ ပဲ ပွ တ်ရ တော့မှာပေါ့ …
“ဟေ့ေ အးနော် … လူတွေ တွေ့သွားအုံးမယ်ကွာ “
“ခ ဏလေးပါ … ကိုင် ချင် တယ်ကွာ”
ဒိုင်းကနဲ မျ က်ေ စာ င်းေ လးထိုးပြီး … စာ အုပ် လေး ကို ရ င်ခွ င်ေ ရှ့ မှာ ကွယ်ပေးလိုက်တယ် … ဘယ်လိုလေးမှန်းမသိပါ ဘူး … ကျနော်တ အားချစ် မိသွားတ ယ် …
“တအားဆိုးတာ ပဲ … ဟွန့် …”
“ချ စ် ချစက် … ကို့ကို တကယ်ချစ်တာလား …”
“ချ စ်တယ် … ကိုကရော … တို့ကို ချ စ် လို့လား”
“ချ စ်တာပေါ့ … စတွေ့တုန်းကထဲက … ချ စ်တာ”
“ေ အာ် … တို့က အဖြေအြ မန် ပေးလို့ … အထင်မသေးပါဘူးေ နာ်”
“သေးစရာ လား ချစ် ချ စ် ကလဲ … ဒီေ ခတ်က အင် တာနက်ေ ခတ်လေ “
“အင်း … တသ က်လုံးချစ် မှာလား”
“ချ စ် မှာပေါ့…”
စကားလဲ ပြော… မသိမသာလေး … သူ့ဂျို င်း အော ကက် နေ … ဖက်ထားတဲ့လက်က … လုံးလုံး ကျစ်ကျစ် … ရင်သားဆိုင်ကို … အု ပ် ကိုင်လိုက်မိ တ ယ် … အထိအတွေ့က အိ စက်လွန်းတယ် … ဘရာစီယာ အု ပ်ထားပေမယ့် … ရ င်သားက ထွားမို့လွန်းတ ယ် … ကျနော် ထ င်တ ယ် … ၃၄ ကျော်မယ် ထင်တာပဲ … တင်းတင်းလေး … မို့ မို့လေးကို … ဖွ ဖွ လေးနယ်ပစ်လိုက်တယ် …
“ြေ ဖြးေ ဖးေ နာ် … အ”
“ြေ ဖြးေ ဖးကိုင် … နာတယ် …”
“အကြီးကြီးပဲ ကွာ … အရမ်းကြို က်တယ် …”
“ဘာနှာဘူးလဲ… ချ စ်လို့ ကိုင်တာနော် …”
“တမျိုးကြီးပဲကွာ … အဟင့်”
“ခ ဏလေးကွာနော်…”
“တော်တော့ကွာ … မ နေ တ တ်တော့ဘူး”
သူ တကယ်ပဲ မေ နတတ်တော့ ဘူး … မျ က်နှာလေး က နီ ရဲ တွ တ်ြ ပီး … တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ြ ပီး … ကျနော့် ရင်ခွ င်ထဲမှာ … ခေါ င်းလေး လာဖွ က်ထားတယ် … အနေအထားက ပိုပြီး လုံခြုံသွားတာမို့ … ရင်သားဆိုင်မို့ မို့လေးကို … ကျနော့်သ ဘောရှိ …ြေ ဖးေ ဖြး ပဲ န ယ်ပေးလိုက်တယ် … တင်းြ ပီး မာကျ စ်နေတာ ပဲ … သူ မပြောနဲ့ … နယ်ပေး တဲ့ ကျနော်တောင် … တအားစိတ်ကြွလာတယ် … အလုံးအထ ည်က ခပ်ထွားထွားမို့ … အားရမိတယ် … နယ်ေ ပးနေရ င်း … လက်ညှိုးနဲ့ လက်မက … နို့သီးခေါင်း ထိပ် ဖျားလေးကို လိုက်ရှာ မိတ ယ် … တွေ့သ လိုတော့ရှိသား … သူလဲ ဖီးလ်တက်လာတာမို့ … နို့သီးေ ခါင်း လေးက ဘ ရာ စီယာအောက်မှာ … ထောင်ထနေတ ယ် … ဒါပေ မယ့် ကျနော် ညှစ်လို့မ ရ ဘူး … ဖ မ်းလို့လဲ မရဘူး … ဘရာစီယာက နဲ နဲ မာတယ် …
အပျော့ သားမဟုတ်တာ … ဆိုးတာပဲ … ကြံရာ မ ရတဲ့အဆုံး … နို့သီးခေါင်း နေ ရာလေးကို လက်မ နဲ့ ဖိပြီးပွ တ်ပစ်လိုက်တ ယ် …
“အို … ကို …”
“ဘာတွေလုပ် နေတာလဲကွာ … မ နေ တ တ်ဘူး”
ကျနော့်ကို သူမော့ကြည့်တယ် … သူ့အြ ကည့်ေ တွရဲ့နော က်မှာ … အထိအတွေ့ကို သာယာနေမှ န်း … ကျ နော်နားလ ည်ပါ တယ် … အစဆိုတော့သူ ဘ ယ်ေ နတ တ်ပါ့မလဲ … အထိအတွေ့က အ စ ဆိုတော့… ခံ စားရ ခက်ေ န မှာပေါ့… ဖွ ဖွ လေး န ယ်ေ ပး ရင်း … သူ … ငြီး တွားသံလေး … တိုးတိုးလေး ထွက်လာတယ် … ကျနော်လဲ … စိတ်တွေကြွတက်လာတ ယ် … ကျနော့်ဟာက ပေါင်ကြားမှာ ထောင်ေ နြ ပီ … တင်းနြေ ပီ ဗျာ … သူေ ရာ … သူ့အဖုတ်ကြီးလဲ … အရ ည်တွေ စြို ပီး တ င်းေ နလောက်ြ ပီ … ကျနော်အေ ပါ် ပို င်း က လိေ နရင်းကနေ … အော က်ကို လျှောဆင်းလာတယ် … ပေါ င်သားလေးကို တချက် ပွ တ်လိုက်ပြီး … အ တွင်းပိုင်းကို လ က်ညှိုးလေးနဲ့ … ထိုးနှိုက်လိုက်မိတယ်…
“အို … ကို … တော်ပြီကွာ … “
“ခ ဏလေးပါ … ချစ် ချ စ်ကလဲ …”
“ဟင့် … ယားပါတယဆ်ိုနေမှ …”
ဂါ ဝန် စလေး ပေါ်ကနေ … ကျနော် သူ့အဖုတ်ကို နှို က်တော့ … သူ အလ န့် တ ကြား … ဘေးဘီဝဲ ယာကို လိုက်ကြည့်တယ် … လူရှ င်းတယ်ဆိုေ ပမယ့် … သူ စာအု ပ် လေးကို … အေ ပါ် မှာ အုပ်ြ ပီး … အကာအကွ ယ် ယူပေးတယ်… ရှက်လဲရှက်တယ် … ခံလို့လဲ ကော င်းလို့ နေ မှာပေါ့ … ကားပေါ် မှာ အနှို က်ခံ ရတုန်း က … သူပြီးသွားလို့လားမသိဘူး … အခုတခါ ထပ် နှိုက်တော့ … ပေါ င် ကြားမှာ ပူ နွေးေ နတယ် …
စိုထိုင်းထိုင်းြ ဖ စ်နေတယ် … ပေါ င် နှ စ် ချောင်းကို လိမ်ကျစ်ထားတော့ … နှိုက်လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ … မရမက အတင်းနှိုက်တော့ မှ … လက်တချော င်းစာနေ ရာ ရတ ယ် … ဘယ်ရမလဲ … ကျနော် … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုး … ဟိုပွ တ်ဒီပွ တ် … လုပ်တာပေါ့ … သူ့အဖုတ်ြ ကီးက … တကယ်ပဲ ဖောင်း မိြု့ ပီး …
တင်းကားနေ တာ ပဲ … ကျေ နာ် နှိုက်ရတာ အား မ လို အားမရြ ဖ စ်မိတယ် … ဂါ ဝန် ရယ် … ပင်တီရယ် ခံ နေလို့သာ ပေါ့ … နို့ မို့ဆို … ကျနော်အဖုတ်ထဲ လက်ညှိုး ထိုးထ ည့်ပြီး …မွှေပ စ်လိုက်တာကြာပြီ … ဖွ ဖွ လေးပွ တ်ပွ တ်ပေး တော့ … သူလေ … မျက်စိ လေး စ င်း ကျလာတယ် … ဇတ်ဇတ်တုန် နေတဲ့ နှုတ်ခ မ်းလေးကို … ဖိကိုက်ထားတယ် … အေ ပါ် အောက် ပွ တ်ဆွဲတာ ရှည်သွားရင် … တ ချ က်တချက် သူ တုန်တက်လာတယ် …
“သိဘူး … မ မေးနဲ့…”
“အရမ်းချစ် တာပဲ … ချ စ် ချစ် ရယ် …”
“အင်း … ဟင့် …”
လက်ညှိုးလေး က … အဖုတ်ြ ကီးကို ပွ တ်ရင်းသ ပ် ရ င်း … တဖြေးဖြေးနဲ့ … အကွြဲေ ကာင်းနေ ရာကို စမ်းမိတယ် … အဖုတ်ကြီးရဲ့ အလ ယ်ကောင်တည့်တ ည့်မှာ … အကွြဲေ ကာင်းရှိမှ န်းသိတော့ … လက်သ ည်းလေးနဲ့ …
ခြစ်ြ ခစ်ပေး တ ယ် … သူ တွန့်တွန့်တက်သွားတယ် … ကျနော့်ကိုလဲ တ အားဖက်ထားတယ် … ဖီးလ်တက်လွန်းလို့ ထင်ပါ ရဲ့… မျက်စိ လေးေ တာင် မ ဖွ င့် တော့ဘူး … မှိ တ်ပြီး … ဖီး လ်ခံ နေတယ် … ကျနော်က လဲ … ကုတ်ကုတ်ပေးတယ် … အကွြဲေ ကာင်းနေရာကနေ … အရည်ေ တွက စိုလာတ ယ် … တစိ မ်စိ မ့်ထွက်လာလေ … ကျနော်က ပွ တ်ေ ပး လေ … ကျနော် တ ခုတွေးမိ တယ် … ပင် တီလေး ဝတ်ထားတော့ … ပင်တီလေးေ အာက်က နေ သာ … အဖု တ်ကြီးထဲကို လ က်ညှိုးနဲ့ က လိနို င်ရ င် … ဖီးလ်ပဲ … ကျနော်ရှာတာ ပေါ့ … အဖုတ်ကြီးကို အုပ်ထား တ့ဲ ပင်တီလေးရဲ့အနားသတ်ကို … ရှာ တ ယ် … အကွဲကြောင်းရဲ့ လက်နှ စ်လုံးအကွာလောကမ်ှာ … ပင် တီလေးရဲ့အနားသတ် … ချု ပ်ရိုး ရာ လုံးလုံးကို … ကျနော်စမ်းမိတယ် … ဘယ်ရမလဲ … လ က်ညှိုးလေး က … ပ င်တီလေးကို ဆွဲ မတာေ ပါ့ … သူ သိတယ် … လ က်ကို အတင်းပဲ လာညှစ်တယ် … အဖု တ်ြ ကီးကို အနှိုက်ခံ ရတော့မယ်ဆိုတာ … သူ သိတယ် … ကျနော်ကလဲ မရတော့ဘူး … ပူထူနြေ ပီ … ဖတ်ကနဲ … ပ င်တီချု ပ် ရိုး လေးကို … ဆွဲမလိုက်ပြီး … အဖုတ်ြ ကီးရဲ့ အကွဲြေ ကာငး ရှိရာ် ကို … အြ မန် နှိုက်ပ စ်လိုက်တ ယ် …
“အို … မာ မားရေ …”
“ဟေ့ေ အး … ဟေ့ေ အး ကွာ … အဲ ဒီ လို မ နှိုက်နဲ့ ကွာနော် …”
မျ က်နှာလေး က ပျက်နေ တယ် … အသံလေးက … တုန်တုန်ရီ ရီ နဲ့… သူ တောင်းပန်တ ယ် … သူ
ြေ ကာက်နေ တယ် … ကျနော်ကတော့ မကြောက်ပါ ဘူး … နှိုက်ချင်တာပဲ သိတယ် … အတင်းဖက်ထားရင်း … သူ့အဖုတ်ကြီးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးထဲကို … ကျနော့်လ က်ညှိုး ရော က်သွားတယ် … သူ ထွန့်ထွန့်လူးတယ် …
ကျနော် ယုံပါ တယ် … သူ့အဖုတ်ကြီးကို … ဘ ယ်သူမှ မထိရသေးဘူးဆိုတာ … ဒီလိုမျိုးလဲ တခါမှ အနှိုက်မ ခံရ ဘူးနဲ့ တူတယ် … တ ကိုယ်လုံးြ က က်သီးဖြန်းြ ဖ န်းထ ပြီး … ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲ … မ ရ တော့ဘူး … ကျနော့်စိတ် တွေ ထိန်း မ ရ တော့ဘူး …
ဖီးလ်ကလဲတက် … စိတ်ကလဲ အရမ်းကြွလာတော့ … နှိုက်တာပေါ့… ဂါဝန် စလေး ပေါက်ထွက်သွားမတတ် … နှိုက်တာပေါ့ … အဖုတ်ကြီးရဲ့အော က်ဘက်နားက … အပေါ က်ဝလေးကို လက်ညှိုးလေး က … စမ်းမိထားပြီ … ဝင်ဖို့ တော့ ကြိုးစားတာ ပဲ … မရဘူးလေ … အပျိုလေးဆိုတော့… တ အားညှစ်ထားတာပေါ့… ကျနော် သိလိုက်တာက … ဂျူလီယာက အဖု တ်ကြီးတယ် … ညှစ်အားသ န်တ ယ်ဆိုတာပဲ … ကျ နော့်ဟာသာ ထည့်ပ စ်လိုက်ရ င် … ဝင် ပါ့မလား… ဟင့်အင်း … အတင်းဆောင့်ထ ည့်ပစ် မှ … ရမယ်နဲ့တူတယ်ဗျာ… ဒါဆို
ဂျူလီယာလေး တအားအော်မှာ ပေါ့… အခုတော င်ြ က ည့် … လက်ညှိုးလေးတောင် မဝ င်သေးဘူး … အော်ချ င်နြေ ပီ … တိုးတိုးလေးြ ငီးတယ် … အော က်နှုတ် ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားတယ် … ကျနော့်ကို တအားဖက်ထားတယ် … သူ့ခမျာ… ဖီးလ်တက်တာလား … အရမ်း ခံ ချင် တာလားမ သိ … ကျနော်ကတော့ မရမက နှိုက် တာပဲ … အဖုတ်ြ ကီးရဲ့ အေ ပါက်ဝေ လးမှာ … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ပိတ်ထားရင်း … ဖြိ ပီး ပွ တ်ပစ်လိုက်တ ယ် … သူ မ ခံနို င်ဘူး … ကျနော့်ကို အတင်း ဖက်ထားရင်း ငြီး တယ် …
“အဟင့် … ဟင့် … “
“ကိုရယ် … အို … သေ ပါ ပြီ… အီးး … ဟင့် … “
“အို့ … မာ မားရေ … ရှီးးးးး” “အဟင့် … အို … ဟ င့် …”
“ကိုရယ် … ဟင်းးးး”
ကျနော့်လက်ကို … ပေါင် နှ စ်ေ ချာင်း နဲ့ တအားလိမ် ညှစ်ထားရင်း … ထွန့်ထွန့်လူးကာ … သူ ပြီးသွား၏ … ကျ နော်သိလိုက်တာက … ရုတ်တရက် … အဖုတ် ဝလေးမှာ … ပူကနဲ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားလို့ပဲ … အရည်ေ တွလဲ စိ မ့်ထွက်လာတယ် … သူ ကျနော့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအော င် ဖက်ထားတယ် … သိသိသာသာကြီး ဖ င် လေးက ယမ်းခါ သွားတယ် … အေ ရှ့ကို ကော့ကော့သွားတ ယ်ဆို ပို မှ န် လိမ့် မယ်ဗျ … သူြ ပီး သွားတော့ အြေ ကာ ဆွဲတာပေါ့
… ချ စ်ချ စ် လေး … ငြိ မ် ကျသွားတဲ့အထိကျနော့်လ က်ညှိုးကို … နေရာ မ ရွှေ့မိဘူး … ဒီအတိုင်း လေးပဲ ဖိက ပ်ထားပေးလိုက်တယ် … ကျနော် ငုံြ့ က ည့်လိုက်တော့လေ … သူ မောနေရှာတယ် … ကျနော့်ရင် ခွ င်ထဲမှာ မှီထားရင်း … သူ မျ က်စိ လေးကို မှိတ် ထားတယ် … သိမ့်သိမ့်တုန် အော င် … လှိုက်ဖို မောနေတဲ့သူ့ကို …
အင်း ယားက န်က … လြေေ ပတွေ က … ဝေ့ကနဲ … လှောင် ပြော င်သွားတယ် … မျ က်နှာလေးက ပန်းဆီရော င် လေး သမ်းပြီး… မှိန်းနေရှာတ ယ် … သူ့ပုံ စံ လေးက လေ … ကလေးငယ်လေးလိုပဲ …
အရမ်း ချ စ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ … ကျနော် သူ့နဖူး လေးကို န မ်းလိုက်မိတယ် … ရွှ တ် …
“အင်း … ဂျူလီယာတော့ သေမှာပဲ …”
“အွ န် … ဘာဖြစ်လို့လဲ …”
“ကို မကောင်းဘူးကွာ … အ ရ မ်းမော သွားပြီ …”
“ဒါဆိုလဲကို့ကို မောေ အာင် ပြန်လုပ် ပေးလေ …”
“အင် … ဘ ယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ …”
“ကို့ဟာကိုလဲ ကို့လိုပဲ လုပ် ပေး …”
“အာ … နှာ ဘူး …”
“လုပ်ေ ပး ပါ ကွာ နော် …”
“ဟေ့ေ အးကွာ … ရှက်တယ်”
“မ ရှက်ပါ နဲ့ကွာ … ကိုင်ြ က ည့်”
“ေ နာ က်မှ အရ မ်းကောင်းလို့ ကိုင် ချ င် ပါတယ်ဆို”
“အာာ …ြ ဖစ် ရလေ …”
“အခုတော င် … လက်ညှိုးလေး နဲ့တင် … မျော့ေ နြ ပီ မှတ်လား … ကို့ဟာကြီးနဲ့ ဆို …”
“ကိုနော် … ဟွန့် … တအားညစ်ပ တ်တယ် …”
မျ က်နှာလေး နီ ရဲ တွ တ်ပြီး … ကျနော့် ရ င် ခွ င်ကို လက်သီးဆုပ် လေးနဲ့ တဖုန်း ဖုန်း ထုတယ် … ရိုက်တယ် … ဒါပေမယ့် … ရိုက် ချ က်တိုင်းမှာ အားမ ပါတာ … ချ စ်လို့လား … အားမ ရှိတာလား ကျနော်မပြောတတ် … လက်သီးဆုပ် လေးတွေ ကို ဖ မ်းဆွဲပြီး … လူတကိုယ်လုံးကို ဖ က်ထားပစ် လိုက်တယ် … သူ … ကျနော့်ရ င် ခွ င် ထဲမှာ … ခေါင်း လေးမြှီ ပီး … ခ ဏခဏမော့ကြ ည့်တယ် … ကျနော်သူ့ကို ဖွ ဖွလေး နမ်း မိတ ယ် … အရမ်း ချ စ်မိ သွားလို့ပါ ဗျာ …
“ချ စ် …”
“ဟင် … အင် …”
“ချ စ် … လို့ …”
“ဟင် … လို့ …”
“ချ စ်က … ကို့ကို အတ ည်ကြံမှာ လားဟ င်”
“အွ န် … ကိုနော်…”
“ယောက်ျားလေးဆိုတာက မေးထားရတ ယ်လေ … ဆူးပေါ် ဖ က်ကျလဲဆူးကျိုး … ဖက်ပေါ်ဆူးကျလဲ ဆူးကျိုး …”
“တော်ပါ … တို့က တသက်လုံးချ စ် မှာ … သူကသာ “
“တကယ်နော် … ဟိုလိုရော ချစ် မှာလား …”
“အာ … နှာ ဘူး … ဒါပဲတွေးနေတ ယ် …”
“တွေးမှာပေါ့… ချ စ် ချ စ် က အရ မ်း မို က်တယ်လေ …”
“ဘာမိုက်တာ လဲ “
သူ ကျနော့်ခေါ င်းကို ဒေါ က်ကနဲ ခေါ က်ြ ပီး … နှာခေါင်းကို … ဆွဲလိမ် ပစ်လို က်တယ် …
“အ … နာ တယက် …”ွ
“ချ စ် ချစ် နော်…ြ ပန်လုပ် လိုက်ရ …”
သူ့ေ ပါ င်ကြားထဲက … ကျေ နာ့်လက်ညှိုးလေးကို ပြန် ကလိလိုက်တယ် … သူ ထွန့်ထွန့်လူး သွားတယ် …
“အို .. ကိုနော် မေ နတတ်ဘူးကွာ … အဲ ဒီလို အနို င် မကျင့် နဲ့ ”
“အနမ်းနဲ့ လက် ရုတ်သိမ်းရေး လဲမှာ လား …”
“လဲမယ်… လဲမယ် … ရွှ တ် …”
သူ ကျနော့်ပါးကို ရွှတ်ကနဲ အြ မ န် နမ်းတ ယ် … မနမ်းလို့လဲ မရ ဘူးလေ … နောက်တခါ ကျနော် သူ့အဖုတ်ကြီးကို ကလိလိုက်ရ င် … သူ မျော့သွားမှာပေါ့ … ရ င်တွေ အရမ်း ခု န်သွားမှာပေါ့ …
“ကြောက်ပြီ လား”
“ကြောက်ပါြ ပီ ရှင့်”
“ဟား ဟား ဟား”
“ခ စ် … ခ စ် …”
“လာ … ထ … အိ မ်ြ ပန် နောက်ကျနေ အုံးမယ် “
“အင်း … ဟုတ်သားပဲ”
သူ … မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ … လူက နဲ နဲ ယိုင် ကျသွားတယ် … ကျနော် သူ့လက်မောင်းကို … ဖမ်းကိုင်လိုက်တော့… သူ ကျနော့် လ က်ေ မာ င်းကို ထုတယ် … ကျနော်ခွိကနဲ ရီ မိတယ် … ဒိုင်း ကနဲ မျ က်ေ စာ င်းထိုးခံ ရတယ် … ပျော်ပါ တ ယ် … ကျနော်တို့ရဲ့အိမ်ြ ပ န်ခ ရီး လေးဟာ … အချ စ် တွေ … နားလည်မှု တွေ အြ ပည့်နဲ့ပျော်ရွှင် ခဲ့ ရ ပါ တ ယ် … အြ ပန် ကျတော့ ကားမကြ ပ်ဘူးဗျ … ထိုင်ခုံနေရာ တောင် ရသေးတယ် … နှိုက်ခွ င့် မ ရ တော့ဘူးပေါ့ ဗျာ… ဒါပေ မ ယ့်လဲ … ကျေ န်ာနဲ့ ချ စ်ချ စ် … အရ မ်း နားလည်ရ င်း နှီးသွားတယ်လို့ ခံ စားမိ ပါတယ် … သူ့အိမ် နားထိလိုက်ပို့ပြေး ပီး … ကျနော်အိ မ်ြ ပန်လာခဲ့တယ် … အိမ် တောင်မရော က်သေးဘူး … သူ ဖု န်း ဆက်တ ယ် …
“ြေ ပာလေ … ချ စ်ချ စ် …”
“အရမ်းချစ် တယ် … ရွှတ် … ဒါပဲ နော် … မ နက်ဖြန်မှ တွေ့မယ်”
ဒါပဲနော်ြေ ပြာ ပီး … ဖု န်းချသွားတယ် … ကျနော်တအားပျော် မိတယ်… ကျနော် တ အားေ ကျန ပ် မိတယ်… ကျနော် သူ့ကို တအားချစ်တယ်ဗျာ… အိ မ်ပြန် ရောက်တော့ ရေ မိုးချိုးထမင်းစာြး ပီး … အိပ် ပျော်သွားတ ယ် … မနက်ြ ဖန်ရ ယ် မြန်ြ မန် ရောက်ပါ တော့ … သိပ် ချစ် တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ တွေ့ချ င်လို့ပါ ဗျာ…
မနက်မိုးလင်းတော့ … နှိုးစက် မမြည် ခ င် … ကျနော် နိုးနြေ ပီ … အိပ်ယာထဲမှာအရင်လိုြ ပန်မ အိ ပ် တော့ဘူး … ပျ င်းကြောလဲ မဆွဲတော့ဘူး … ဆ တ်ကနဲ ထလိုက်တယ် … ဟုတ်တ ယ်ေ လ … ကျနော်က ရီး စားရနြေ ပီ … ချ စ်ချ စ် နဲ့သွားတွေ့ရ မယ်… နောက်ကျနေ ရင် … စိတ်ဆိုးနေအုံးမယ် … မေ ကာင်းဘူး … ခ ပ်သွက်သွက်ပဲ … ရေမိုး ချိုး … အဝတ် စားလဲ … rollon ကို ခပ်ြ ပ င်းြ ပ င်းလေးလှိမ့် ပစ်လိုက်တယ် … ချွေး ထွက်သံယိုတွေ
လုပ် ရမယ်ဆို … နံေ န မှာစိုးလို့ … သေချာပြ င်ဆင် လိုက်တယ် … ပြီးတော့ … ချ စ်ချ စ်က အေ မွှးနံ့ ကြိုက်တဲ့ပုံပဲ လေ … မွှေးတာကတော့ မ မှား ပါ ဘူး … ချ စ်သူနဲ့သွားတဲ့အခါ စိတ်ြ က ညန်ူး မှုရတာပေါ့ေ နာ့ … ခ ပ်သွက်သွက်လေး
လျှောက်ရ င်း … ကားမှတ်တိုင် မှာ … ချ စ် ချစ် စော င့်နေတ ယ် … သိပ်လှတာပဲ … အဖြူေ ရာ င် ရ င်ေ စ့ အင်္ကျီလေးနဲ့
… အနီေ ရာ င်ထမီလေးနဲ့ သိပ်လှတာပဲ … ခ ပ်ထွားထွားရင်သားဆိုင် တွေ ကို … အမဲ ရောင် ဘော်လီနဲ့အုပ်ထားတယ် … အြ ဖူ ရော င် ရင်စေ့ အင်္ကျီလေးက နဲ နဲ ပါးတော့ မြင် ရတာပေါ့ … တမျိုးလေးပဲ … သိပ် ချ စ် မိတ ယ် … ဖြစ်ညှစ် ပ စလ်ိုက်ချင် တယ် … အင်္ကျီတွေ အကုန် ချွတ်ြ က ည့်ရင် … ချ စ် ချ စ်ရဲ့ရ င် သားဆိုင်ေ တွက …
သိပ်ထွားမှာပဲ … နို့သီးေ ခါင်း လေးေ တွ က … သေးသေးလေးလား…ြ ကီးကြီးလေးလား ကျနော် သိချ င်လိုက်တာဗျာ…
“ဟိတ် … ဘာလို့ အဲ ဒီလောက် စို က်ကြည့်နေတာ လဲ …”
“အပိုတွေ … နှာ ဘူးလေးနော် …”
“ရှူးတိုးတိုး … မေ န့က အိပ်လို့ ပျော် လား …”
“ဟင့်အင်း … ကောင်းကောင်းအိပ် လို့ မ ရဘူး …”
“အတူတူပဲ … ကိုလဲ အိ ပ် လို့မပျော်ဘူး …”
“ကြမ်းပိုးကို က်လို့မှတ်လား …”
ှအရွှတ်အနောက် ပြောပေ မယ့် …ြ ဖန်းကနဲ ရှက်သွေြး ဖန်းသွားတဲ့… ပါြး ပင် လေးက … နံ နက်ခ င်းရဲ့
နေေ ရာ င်အောက်မှာ … သိပ်လှတာပဲ … လူရှင်း လို့ကတော့… ဖက်နမ်း ပ စ်လိုက်မယ် … ပါးချို င့်လေး
မြု ပ်သွားအောင် … နှာခေါင်းလေးနဲ့ ဖြိ ပီး န မ်းပစ်လို က်လို့ကတော့ … အဟိ
“ချ စ် ချစ် … ဘယ်လိုသိ”
“ရ င်ဘ တ်ထဲက သိ … ခ စ် … ခ စ် …”
နှ စ်ယောက်လုံး တခစ် ခစ် နဲ့ရီလိုက်မိ တ ယ် … ပျော်လိုက်တာဗျာ … ဆတ်က နဲ သူ့လက်ဖ ၀ါးလေး ကို … ကျနော် ဆုပ်ကို င်လိုကမ်ိတယ် … ခို င် ခို င်တွဲ ထားတဲ့လက်တွေ … တသက်လုံး … ဆုပ်ကိုင်ထားခွင့် ရမယ်ဆိုရ င် … ကျနော် အရမ်းပျော်မိ မှာပဲ …
“ချ စ် ချစ် …”
“သင်တန်းမသွားနဲ့ကွာ”
“အွ န် … ဘာလို့လဲ”
“ရု ပ် ရှင်ကြ ည့်ချင်တယ် …”
“အာ … ဖျ က်စီးရေးသမားပဲ … နောက်ေ န့ မှ ကြည့်ကွာနော် …”
“ဟင့်အင်း … အခုပဲ ကြည့်မယ် …”
“စိတ်ညစ် ပါ့ … သွားလေ …”
“အခုကြည့်ချ င်တာလား … နေ့လည်မှြ က ည့်ြ ပီးေ ရာ“
“ဟင့်အင်း … အခုဆို အခု ပဲ “
ခေါင်း မာတဲ့ ကျနော့်ကို … ချ စ်ချ စ်က အလိုလိုက်ရှာတယ် … သ င်တ န်းမတက်ပဲ … ရု ပ် ရှင်သွားကြည့်ဖို့ …
ြေ ခလှမ်း တွေ က … ဦးလှည့်လိုက်တယ် …ကိုးနာရီ ခွဲ တော့မယ် … ရုပ် ရှ င်ရုံ တွေဘက်ကို … ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်ြ ပီး … အဆင့်မြင့် ရု ပ်ရှင် ရုံတခု ထဲ ဝင်လိုက်မိတ ယ် … ဘာကားမှန်း တောင် မသိ ပါဘူး … ကျနော်လက်မှတ် ၀ ယ်လိုက်မိတ ယ် … စာရေးမလေးက … ဘယ်ေ နရာ လဲ အကိုလို့ မေးတော့… ထော င့်စွ န်းနေရာ ကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပ စ်လိုက်တယ် … ကောင်းရော … ရုပ် ရှင် ရုံထဲရော က်တော့ … သ့ပုံ စံလေး က ရှက်ကိုးရှက်ကန်း
ဖြစ်ေ န ပုံ ပဲ … ကျနော့်လ ကက်ို ခ ပ်တ င်းတင်း ဖက်ထားရင်း … အပေါ်ထပ် ကို တက်လာ ခဲတ ယ့် … ကျနော် ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်က … DC လက်မှတ် … ၄၅၀၀ ကျပ် … ဈေြး ကီးပေမယ့် … ကျနော်ဝယ်ခဲ့ တယ် … ချ စ်ချ စ် နဲ့နှစ် ယောက်ထဲ … အေးအေး ဆေးဆေးကိုင် ချ င်လို့ … အေဲလ … ထိုင် ချ င်လို့ပါ ဗျာ…
“ကို … အောက်ထပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလား …”
“ဟင့်အင်း … အပေါ်ထပ် မှာက လူနည်းတယ်ေ လ …”
“ေ အာ် … အော် … အဲ ဒါလဲ ကော င်းတာပဲ … တယောက်ယောက်တွေ့သွားမှာ စိုးလို့ …” “အင်း … အဲ ဒါြေ ကာင့် DC ခုံ ဝယ်လိုက်တာ …” “အင်း …”
အပေါက်ဝ ရော က်တော့ … လက်မှတ်ြ ဖတ်တဲ့ မမ တယောက် ရ ပ်နေတယ်… ခ ပ်ေ ချာေ ချာလေးပါ ပဲ …
ကျနော်တို့ အတွဲ ကို ကြ ည့်ပြီး … သူ့မျကန်ှာက ပြုံးတုံ့တံ့ ဖြစ် သွားတယ် … ကျနော် သိပါတ ယ် … သူ့ စိတ်ထဲမှာ
… အတွဲတတွဲ တော့ တက်လာပြန်ြ ပီ … အမှော င် ထဲမှာ … ရု ပ် ရှ င်မကြည့်ပဲ … အဟိဆိုပြီး တွေးနေ မှာသေ ချာတယ် … ဝင်ပေါ က်ဝက … လိုက်ကာကြီးကို ဆွဲ ဖယလ်ိုက်တာနဲ့… ရုပ် ရှင်ရုံထဲ က အအေး ဓါ တ်က … အေး စိ မ့် နေ တာ ပဲ … မှောင်လဲ မှော င် နေပြီ … ရု ပ်ရှ င်စြ ပနြေ ပီ ကိုး … ကျနော် … ချ စ်ချ စ်လက်ကို ဆွဲ ရင်း … DC တန်းေ ပ်ါတ က်သွားတယ် … ကျနော် ယူထားတဲ့ နေ ရာက … ထော င့်စွ နး ခုံ် … အပို င် ပဲ … မီးရောင် မှိ န်မှိ န် လေးအော က်မှာ … ကျနော် နဲ့ချ စ် ချစ် … ထိုင် ခုံမှာ ထိုင် မိ တယ် … သူ ရ င်တွေ ခုန် နေတယ် … ကျနော် ရင်တွေ တုန် နေတယ် … ချစ်တယ်ဗျာ… ကျနော် သူ့ကို ဖက် ထားလိုက်မိ တယ် …
“အိုး … နေပါအုံး …”
“အရမ်းချစ် တယ် … ချစ် ချစ် ရယ် …”
“အတူတူပါပဲနော်”
“အရမ်းအေး လား … ချစ် ချစ် …”
“ေ အးတ ယ် … ဖက်ထား”
ဟုတ်ပဗျာ … ကျနော်တို့ ခေါင်း ပေါ် မှာ … အဲ ယားကွန်းြ ကီးက … တဝှီးဝှီး နဲ့ မှုတ်နေတာ … အေးလိုက်တာ … ကျနော် ချ စ် ချစက်ို ဖက်ထားပြီး … ရင် ခွ င်ထဲကို ထည့်ထားလိုက်တယ် … ဟုတ်ပဗျာ …
နှ စ်ယောက်ကိုယ်ေ ငွ့နဲ့ဆိုတော့ … ရင် ဘတ်က နဲ နဲ နွေးသွားတယ် … ချ စ်ချ စ်ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးက …
ကျစ်ကျစ်လေးဗျ … လက်ေ မာ င်းသားလေးဆိုလဲ တင်းနေတာ ပဲ … ကျနော်ဖက်ထားရင်းလက်မောင်းသားလေးကို …
“အင် …ြေ ပာ လေ ကိုရဲ့…”
“ချ စ်ကို နမ်း ချ င်တယ်ကွာ …”
“လုပ်ပြီ … ကိုေ နာ် … ဟင့် …”
ရု ပ်ရှ င် ပိတ်ကားက အလ င်းရောင် နဲ့… မလ င်း တလ င်း ခ ပ် မှိ န်မှိ န်ကြားထဲမှာ … ကျ နော့်ရ င် ခွ င်ကြားထဲ က … သူ့မျက်ဝ န်းတွေက … အရောင်လက်နေတယ် … နှု တ်ခ မ်း လေးက ဖူးကြွနေတယ် … ကျနော် သူ့ကိုချစ်တယ် …
ငုံ့ နမ်း မိလိုက်တယ် … ချစ် ချစ် မျ က်နှာ လေးမော့တက်လာတ ယ် … ကျနော် နှုတ်ခ မ်းဖူး ဖူးလေးကို ဖွ ဖွ လေး ငုံလိုက်မိတယ် … ချ စ်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရယ် … အဲ ယားကွ န်းကြောင့် … အေးစက်နေပေ မယ့် … ကျနော်တို့နှ စ် ယောက်ရဲ့ခ ပ်နွေးေ နွး အချ စ် တွေ က … လွှမ်းခြုံသွားတော့ … ကျနော် တော့ မေ အးေ တာ့ဘူး … ကျနော့်ရ င် တွေပူလာတယ် … လ က်ေ မာ င်းလေးကို ပွ တ်သပ်နေတဲ့ လက်က … အောက်ဘ က်ကို
လျှောဆင်းသွားတယ် … ခါးလေးကို ပွ တ်လိုက် … ပေါ င်သားလေးကို ပွ တ်လိုက် … အနမ်းကတော့ မ ပျ က်ဘူး … ပျားရည်လို ချိုတဲ့ … သူ့နှုတ်ခ မ်းတွေကို … ကျနော် လျှာလေးနဲ့ တို့လိုက်မိ တ ယ် … ပြီးတော့ …
ဇတ်ဇတ်တုန်နေတဲ့ သူ့လျှာ လေးကို … ကျနော့်လျှာ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် … သူ တုန်တက်သွားတ ယ် … ဆတ်ကနဲ လူးလွန်းသွားတယ် … ကျနော် ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားရင်း … အန မ်းတွေ ဖလှယ်ကြတယ် … သူ့လက်လေးက … ကျနော့် ပေါ င်ြ ကား ကို လာဖိထားတယ် … နမ်းရင်ြး ပု ရင်း … သူ့လက်က နေရာ မှားပြီး … ဖိထားဟန်တူပါ ရဲ့… အန မ်း တွေက တဖြေး ဖြေး မွ တ်သိပ်လာတယ် … ဖီးလ်လဲ တက်လာတယ် …
ပေါ င်ကြားကဟာကလဲ တြေ ဖးြေ ဖးြ ကွတက်လာတယ် … သူ့လက်ကလေးတော့ ရိုး ရိုး သား သား ဖိထားတုန်းပဲ …
“၀ ရော … ဒိုင်း … ဒိုင်း … ဒိုင်း …”
ရု ပ်ရှ င်က … စ စ်ကားလား မသိ ပါဘူး … ဒိုင်းဒိုင်း ဒ က်ဒက် ရုတ်တရက် ပေါ က်ကွဲ သံတွေြေ ကာင့် … ကျနော်တို့ … အလန့်တကြား အနမ်းတွေ ရပ်သွားတယ် … တယောက်မျက် နှာ တယောက် ကြည့်ပြီး … ခစ်ကနဲ ရီ လိုက်မိတ ယ် … ဘယ်ရ မ လဲ… ကျနော် သူ့ကိုြ ပန် ဖက်ြ ပီး … ပြန် နမ်းတာပါ့ … ပါးလေးကို န မ်းတယ် … ရွ ရွ လေး … နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ပွ တ်ဆွဲပစ် လိုက်တော့… သူ့မျက်နှာ လေးမော့တက်လာတယ် … ရင်သားလေးက ကော့တက်လာတယ် … ချ စ်တယ် … ကျနော်သူ့လည်တိုင်လေးကို … ဖိန မ်းလိုက်မိ တယ် …
ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ဒါေ ပမယ့် ကျနော် ခ ပ် တင်းတ င်းဖက်ထား ရင်း … လက်ဖဝါး က … မို့ မော က်နေတဲ့ ရင်သားဆိုင်လေးကို … အုပ်ကို င်လိုက်မိတယ်… သူ ဘာမှ မြေ ပာ ဘူး … ကျနော်ဆက်န မ်းတယ် … နားရွ က်လေးကို … ဖွ ဖွလေး … ထိမိတ ယ် … သူ တွန့်သွားတ ယ် … ရု န်း တယ် …
“အိ … ယားတယ်ကွာ … တမျိုးကြီးပဲ …” “အရမ်းချစ် တယ် …”
“အင်း … အို့ … ယားတယ် … အရမ်းယားတယ်နော်… “
ကျနော် … သူ့နား ရွ က်လေးကို န မ်း လိုက် … နားရွ က်လေးကို … ဖိကိုက်လိုက် … သြဲ ကီး မဲြ ကီး န မ်းနေ မတယ် … ကျနော့်လက်က လဲ မာန် ပါ လာ တယ်ဗျ … ကျနော့်လ က်ဖ ၀ါးနဲ့ခပ် ထွားထွားရင် သားကို … ဘရာစီယာပေါ်ကနေ …
အုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ် … ခ ဏခ ဏလဲညှစ် မိတ ယ် … ကျနော် ဒီလိုမျိုး လုပ်ပေး တော့ … သူလဲ စိတ်ကြွလာတယ်နဲ့… တူတယ် … မ ရိုးမ ရွ နဲ့ … ရိုး သားတဲ့ သူ့လက်က … ကျနော့်ဟာကို ဆုပ် န ယ်လာတ ယ် … အားပါ ပါလေးညှစ်တယ်… ကျနော် ကြိုက်တယ်ဗျာ… မလုပ် တတ် လုပ် တ တ်နဲ့… ကျနော့်ဟာကို … သူကစားပေးနေတဲ့ပုံလေးက … ကျနော့်စိတ်ကို ပြို ကွ စေတယ်… ကျနော့် လက်တဖက်နဲ့ တင် အား မ ရ တော့ဘူး … နော က်လက်တဖက်ကပါ … ချို င်းအော က်ကနေ လျှို ပြီး … နှိုက်လိုက်တယ် …
“အို … ကို့ … ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ … နေ ရခက်လိုက်တာ … ဟင့် …”
တဖက်ကနယ် … တဖက်က … နို့သီးဖျားလေး ကို … လိုက်ရှာ … မတွေ့ဘူးဗျ … ဘရာစီယာပဲ ခံ နေလို့လား မသိပါ ဘူး … ဒါနဲ့ပဲ … မာ န်ထ နေတဲ့ ကျနော့်လက်တွေ က … ရ င် စေ့ အင်္ကျီလေးရဲ့ … ကြ ယ်သီးတွေကို … ရန်ရှာ မိတယ် …ြ က ယ်သီး … တလုံး နှ စ်လုံး … ပြုတ်သွားတနဲ့… လက်က သူ့အလိုလို … အင်္ကျီထဲကို
ဝင်သွားတ ယ် … ကေ င်းလိုက်တာဗျာ … အိေ န တာပဲ … ကျစ်နေတာ ပဲ … ဘ ရာစီယာခံထားတဲ့ သူ့ရင်သား တွေက … သစ်တော်သီးအလားပဲ … နာနာ လေးညှစ် ပ စ် လိုက်တယ် … အားရဖို့ ကောင်းလိုက်တာ … အလုံးအထ ည်က လက်ဖဝါးတအုပ် စာ လောက်ရှိတယ်ဗျ … ကျနော် မွှ န်သွားပြီဗျာ … အတင်းပဲ … နယ်ပ စ် လိုက်တယ် …
“အ … နာ တယ် … ဖြေြးေ ဖးကိုင် … ကျွ တ် …”
ကျွတ်ကျွက်မြည်သံတွေကို … ကျနော် ဂ ရု မစိုက် တော့ဘူး … ခ ပ်ဆဆလေး စိတ်ကြို က်န ယ်ပ စ်လိုက်တယ် … ရင်သားဆိုင်က လဲ … ကိုင် လေ ထွားလေဆိုသလိုပဲ … လက်ထဲမှာ ပိုကြီးလားသလိုပဲ … ကျနော် တ အားသဘောကျမိတ ယ် … ညှစ် နေရ င်း … နို့သီးေ ခါင်းလေးကို ရှာတာပေါ့ … ဟောတွေ့ပြါ ပီ … ဘ ရာစီယာအောက်မှာ စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါ င်း လေးကို စ မ်း မိတယ် … တွေ့တာနဲ့… လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ … ညှစ်ပြီး ဖိေ ချ ပ စ်လိုက်တယ်
“အား … အဟင့် … ကို … ကို့ … တော်ပါ တော့ေ နာ် … တို့ မ နေတတ်တော့ ဘူးကွယ် …”
“ချ စ် ချစ် … အရမ်း ချ စ်တယ်ကွာ …”
“အင်းအင်း … အရမ်း ချ စ် တယ်”
ဆိုပြီး … ကျနော့်ကို အတ င်းဖက် .. .နှုတ်ခမ်းချ င်း တြေ့ ပီး … ကျနော့်ကို ဖိန မ်းပစ်လိုက်တယ် … သူ့လျှာလေးက … အတင်း ပဲ ကျနော့် နှုတ်ခ မ်းကြားထဲတိုးဝင်လာတယ် … လျှာချင်း ကလိကြတယ် … ထိကြတယ် … တုန်က နဲ တုန်က နဲ ဖြစ် ဖြစ်သွားတယ် … ကျ နော့်လက်ကလဲ သူ့နို့သီးခေါ င်းလေးကို … ရေဒီယိုလိုင်းရှာသလို … ဟိုဘက်လှည့်လိုက် … ဒီဘက်လှည့်လိုက် … လက်ညှိုးနဲ့လက်မ ဖြိ ပီး … လှိမ့်လှိမ့်ချေနေမိသည် … သူ ကြိုက်မှာ ပါ … တချက်တချက် … ဖီး လ်တ က်သံက … လှိုဏ်သံပါတ ယ် … ဝမ်းတွင်းကနေ ထွက်လာတဲ့ … ဖီးလ်တက်သံက ကျနော့်ကို အရ မ်း ပဲ ဖီးလ်တက်စေတယ် … နှု တ်ခ မ်း ချင်း န မ်းနေလို့ေ ပါ့ … နို့မို့ဆို … ရု ပ်ရှ င် ရုံထဲမှာ အကျ ယ်ကြီးထွက်လာမယ်ထင်တာပဲ … ရေဒီယိုချိန်တာ ဝသွားတော့ … ကျနော့်လက်က အြ ငိမ် မနေ တာ့ဘူး … အောက်ဘက်ကို … လျှောဆ င်း လာတယ် … အထက်ဆင် လေးကို … ဖြည်ချ လိုက်ပြီး … အနီ ရောင်ထ မီ လေးကြားထဲကို … ကျနော် လ က်လျှို လိုက်တယ် … ဖောင်းအိေ နတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို … ကျနော်နှိုက်လိုက်မိ တယ် … ကောင်းတယ် … ပ င်တီခံနေပေ မယ့် … တင်းနေတာ ပဲ ဗျာ… ဖော င်းဖောင်းမို့ မိြု့ ကီးကို … ကျနော် အားရ ပါးရ … ကလိပ စ်လိုက်တယ် …
“အို … ကို့ …ြေ ဖးဖြေး နော် … “
အနမ်း ချ င်း ကွာပြီး … နှု တ်ခ မ်းလေးက သတိေ ပးသံထွက်လာတ ယ် … ရှီးကနဲ အော်သံလေးက နဲ နဲ ကျ ယ်သွားတယ် … ဒုက္ခပါ ပဲ … နှု တ်ခ မ်း ချင်းြ ပ န် တြေ့ ပီး … အောက်က အဖုတ်ကြီးကို အသေ နှိုက်တော့တာပဲ … ပ င်တီေ ပါ် ကနေ အကွဲကြောင်းကို … လက်နဲ့ထိုးတ ယ် … ပွ တ်ဆွဲ တယ် … အောက်နားက … အေ ပါက်ဝလို့ ထင်တဲ့နေ ရာကို လက်နဲ့ ထိုးတယ် …
သူ ထွန့်ထွန့်လူးတယ် … ကော့ကော့ တက်လာတယ် … ကျနော်က လဲ နှိုက်တယ် … အဖုတ်ြ ကီး အားရဖို့ ကော င်းတယ်ဗျာ… လက်ထဲမှာ …ြ ပည့်ပြည့်ဝ၀ ကိုင် ထား ရင်း … နှိုက်တာပေါ့ … ပ င်တီလေး ခံ နေပေမယ့် … အရည်တွေ စိုစိ စို စိြ ဖစ် နြေ ပီ … ဖော င်း မို့ နေတဲ့ နှုတ် ခမ်းသားကြီးနှစ် ခုကြားထဲက … အကွဲကြောင်းလေးတလျှော က် … ကျနော် ပွ တ်တာပေါ့ … အော က်ပို င်းအဝနားလေးရော က်ရ င် … သူ့ကိုယ်လုံးလေးက တုန်က နဲ ဖြစ်သွားတယ် … နာနာလေး ဖိ ပ စ်လိုက်တော့… ဟ င်း ဟင်း ဟင်းနဲ့ …
ငြီးတက်လာတ ယ် … ကျနော်လဲ ပွ တ်တာပေါ့ … အရည် တွေကလဲ စို စိစိ နဲ့… ပင်တီလေးက အကွဲကြောင်းအတိုင်း ကပ် နြေ ပီ … ကျနော် ပ င် တီကို ဆွဲချွတ်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … မ ဟုတ်သေးဘူး … ဖြန်း ကနဲ … ပ င်တီလေးကို … ဆွဲဖြဲ ပြီး … ချစ် ချစ် ပေါ င်ကြားထဲ ခေါ င်းထိုးပြီး … ယက်ပ စ်လိုက်ချင် တယ် …
နှုတ်ခမ်းသားထူထူနှ စ် ခု ကို ဆွဲဟပြီး … ရွှတ်ကနဲ လျှာနဲ့ သပ်ပ စ်လိုက်ရင် လေ … ချ စ်ချ စ် …
ထအော်မလားမသိဘူး … အခု တောင်ြ က ည့် …ြ ငီးသံလေးက ကျယ်လာပြီ … အရမ်းကျယ်လို့ မြ ဖ စ် ဘူး …
ရု ပ်ရှ င် ရုံထဲမှာ ဆိုတော့ … အသံကျယ်သွားရင် … ကွိုင်တက်လိမ့်မယ် … ကျနော်သူ့နှုတ် ခ မ်းလေးကို ဖြိ ပီး … ငြီးသံလေးကို တိတ်အောင် လုပ် လိုက်တယ် … ဒီလိုန မ်းတော့ … ပိုဖီးလ်တက်တယ်ဗျ … ချ စ် ချစ် ရဲ့အဖု တ်ကြီးကို
နှိုက်ရင်း … ချစ် ချ စ်ရဲ့နှု တ်ခ မ်းကို ဆွဲဆွဲစုပ် ရတဲ့ အရသာ က ဖီးလ်ပဲ ဗျာ… ကျနော့်ဒုတ်ကတော့ … ထောင် နြေ ပီ … တင်းနေတာပဲ … သံဒုတ်နဲ့ပြို င် ရို က်ရ င် သံဒုတ်ကျိုးနိုင်တ ယ် … အဟိ … နှုတ်ခ မ်း နဲ့ ဖိ ပိတ်ထားတဲ့ကြားက … အဟင့်အဟ င့်ဆိုတဲ့ … ငြီးတွားသံလေးက … ထွက်ေ နတုန်းပဲ … အ ရ မ်းချ စ် တယ် ချ စ် ချ စ် ရယ် … တင်းြ ပီး လုံးထွားနေတဲ့ နို့ကိုပဲ ဆွဲေ ချပြီး … အဖုတ်ကြီးရဲ့ အစေ့ ရှိ မယ့်ေ နရာ ကို … အတင်း ပွ တ်ေ ချ ပ စ်လိုက်တယ် … အွ န် … အဟင့် … အဟင့်ဆြို ပီး … တွန့်လိမ်တက်သွားတ ယ် … ကျနောကို့် အတင်းဖက်ထား တယ် … အဖုတ်ကြီးကို ဆတ်ကနဲကေြာ့ ပီး … သူြ ပီးသွားတယ် … သူြ ပီးသွားတယ …်တွန့်ကာလိမ်ကာနဲ့ … ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အရသာ ကို … ချ စ်ချ စ် … တော်တော်ခံ စားလိုက်ရတ ယ်နဲ့ တူတယ် … ရ င်တွေတဒိန်းဒိ န်းခု န်သံကို … ဒီအတိုင်းတောင် ကြားရတယ် … လက်ကလဲ အရည်တွေ တော်တော်စို နေပြီ … ပြီးသွားတော့ … ချစ် ချစ် …
နဲ နဲ အားယု တ်သွားတယ်ထင်ပါ ရဲ့… ကျနော့်ကို ဖက်ထားတဲ့လက်က လေးက … အားလျော့သွားတ ယ် … ကျနော် ကပ်တိုးလေးမေးလိုက်တယ် …
ချ စ်ချ စ် … ကော င်း လားဟ င် … အရမ်း ကောင်းတယ် … ကိုရယ် … ချ စ် ချစ် … သေလိမ့် မယ် … အဟင့် … ရွှတ် …
ကျနော့်ပါးကို အတ င်း ပဲ န မ်းကြူပစ်လိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် ဖီးလ် တက်နေပြီ … တကယ်ကို ဖီးလ်တက်နေတာာ … ကျနော်လဲ တ က်တာပဲ … ဒါပေ မယ့် ကျနော်က မြ ပီးသေးဘူးလေ … ကျနော့်ဒုတ်ကို ချ စ်ချ စ်ကိုင်ြ ကည့်ေ စချ င် တယ် … ကျနော်ဘောင်းဘီဇ စ်ကို ဖြု တ်ပြီး … ကျနော့် ဒုတ်ကို အြ ပင်ကို ဆွဲထုတ်လိုကတ် ယ် … ဒိုင်းက နဲ ထောင်မတ်နေတဲ့ … ကျ နော့်ဟာကို … မီးရောင်မှိန် မှိ န် အောက်မှာ တော့ … ချ စ်ချ စ် တွေ့မှာပါ …
“အယ် … အကြီးကြီးပဲ …”
“သွားပါ … ကြော က်စရာ ကြီး …”
“ကို့ဟာကို ကိုင်ထား …”
“ဟေ့ေ အး … ကိုင်ရဲ ဘူး …”
ကိုင် ရဲ ဘူးဆြို ပီး … ကျ နော့်ဟာကို … မထိမထိလေးလာဆုပ်တယ် … ဖို အင်္ဂါရဲ့အထိအတေ့ွကို ဘယ်အပျို စ င်ကများ လွန်ဆန် နိုင်မှာ လဲ… သူ ဇိကနဲ ခ ပ်တင်းတ င်းဆုပ်ကိုင် ပစ်လိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရဲ့လက်ဖဝါးနုနု လေးက … ကျနော့်ဒုတ်ကို ဆုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ အသိကြော င့် … ကျနော်အရ မ်းကျေနပ်တယ်ဗျာ… ကျနော်ကြို က်တယ် … ကျနော်လဲ သူ့နို့ကို ခပ် တင်းတင်း ညှစ်ပ စ်လိုက်တယ် …
“အို့ … ကို့ … အဟင့် …”
“ဒီလို က စားေ ပးလေ …”
ချ စ်ချ စ်လ က်ကို ကိုင်ြ ပီး … အထက်အောက်… ထုပြလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် တင်းတ င်း လေး ဆုပ်ြ ပီး … ကျနော့်ဒုတ်ကို ထုပေးရှာ တ ယ် … ကျနော်လဲ သူ့နို့ လုံးလုံးလေးရဲ့ နို့သီးဖျားကို ဖိ ချေ ပ စ် လိုက်တ ယ် … တဟင်းဟ င်းနဲ့ … သူလဲ ဖီးလ်တ က်လာတယ် … ကျနော် သူ့အော က်က အဖုတ်ြ ကီးကိုလဲ ကိုင်ြ ပီး
နှိုက်ပစ်လိုက်တ ယ် … ချစ် တယ် … ချစ် ချစ် ရယ် … အသွေးအသားတွေပွ က်ပွ က်ဆူအော င် … ကျနော်တို့ … ပွ တ်သ ပ်ဆ ပ်ုနယ်ကြတယ် … ချစ် ချ စ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကို က်ထားပြီး … ခ ပ်နာ နာလေး … ကျနော့်ကို ထုပေးတယ်… ကျနော် ကလဲ ဘ ယ်ရ မလဲ… သူ့အဖုတ်ကြီးကို နှိုက်တာေ ပါ့ … အြ ပ န်အလှ န် … ထုကြ နှိုက်ြ က နဲ့ … ဖီးလ်ပဲ ဗျာ … အရ မ်းဖိးလ်တက်တယ် … ဘယ်လိုမှ န်းကိုမ သိဘူး … စိတ်တွေ တအာြး ကွ ပြီး … ဗြန်းက နဲ အရည်တွေပ န်းထွ က်သွားတယ် … ရှီးကနဲ ငြီးသံနဲ့အတူ … ကျနော် ချစ် ချ စ် အဖုတ်ကြီး နှိုက်ရ င်း … တကိုယ်လုံး ဇတ်ဇတ်တုန်သွားတယ် …
“အို … ကို့ … ဘာတွေလဲ … လက်မှာ ပေကုန်ြ ပီ …”
“အရည်တွေ လေ … မလွှတ်နဲ့အုံးကွာ … ဒီအတိုင်း ပဲ ကိုင်ထား … “
“အင်း … တ အားဆိုးတယ်ကွာ … ဖီး လ်တက်နေတာလား … အဟင့် …”
“တက်တာပေါ့ချ စ်ချ စ် ရ ယ် .. ချစ် ချ စ် လုပ် ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ် …”
“အင်း … ကို့ … အဲ ဒီလို … မနှိုက်နဲ့ ကွာ … ကျင်တယ် … အိ … ဟင့် … ဟ င့် … ရှီးး “
တကိုယ်လုံး … တွန့်ကာလိမ်ကာ … ချစ် ချ စ် … ပြီးသွားတယ် … နှစ် ယောက်သား … ကာမအထွ ဋ်အထိပ်ကို …
ရော က်သွားတော့ မျ က်စိ တွေလဲ ပြာ ကုန်တယ် … တယောက်ကို တယောက်ဖ က်ထားရင်း … အချ စ်လှိုင်းပုတ်တဲ့ အရ သာ ကို … တငြိမ့်ြ ငိ မ့် နဲ့ ဖီးလ်တွေ့နေကြတယ် … ချစ် ချ စ်လဲ … တူတူပဲ … မျ က်စိ လေး စ င်းြ ပီး …
ကျနော့်ရ င်ခွ င်ထဲ ခေါ င်းတိုးကာ … ပွ တ်ချွဲ နေတယ် … အရမ်းချ စ် တ ယ် … ချ စ်ချ စ်ရယ် … ချ စ် ချ စ်က
ြေ ပာ စကားနားထောင်တယ် … သူ အခုထိကျနော့်ဒုတ်ကို ဆုပ် ကိုင်ထား ဆဲ… အရည်တွေပေပွနေ တာတော င် … မလွှတ်ဘူး … ကျနော်ကြို က်တယ် …
“ချ စ် ချစ် … “
“ကိုနဲ့အတူတူေ န ချ ငလ်ားဟင် …”
“ေ နချ င်တာေ ပါ့ ကိုရယ် … နေချ င်တာပေါ့ …”
“ဒါဆို အိ မ်မြ ပန်နဲ့တော့ကွာ …”
“အွ န် … အဲ ဒီလိုတော့ လိုက်ရဲ ဘူး … ပါ ပါးက သတ်မှာပေါ့ …”
“ဒါဆို ချ စ်ချ စ်အိ မ်ကို လိုက်ခဲ့မယ် … “
“အွ န် … အဲ ဒါ က ပိုဆိုးမှာပေါ့ … ကိုရဲ့ ”
“ချ စ် ချစ်ကို အခု လေ … ကို တ အားချ စ် ချ င်နေတယ် …”
“အခုလဲ ချ စ်နေတာပဲ လေ …”
“ဟုတ်ဘူးလေကွာ … ချ စ် ချ စ် … အဖုတ်ထဲကို … ကို့ဟာကြီး … ထည့်ချင် တာ …” .
“အံ မယ်လေး … ဟ င့်အင်း … ဟင့်အင်း … ချ စ် ချစ်ြေ ကာက်တယ်နော်… မလု ပ်နဲ့“
“လုပ်ချ င်တ ယ်ကွာ … အရ မ်း ပဲ …”
“ဒီမှာ … ဒါကအကြီးကြီး … အဲ ဒြါ ကီးနဲ့ဆု… ချ စ် ချ စ် သေ မှာပေါ့…”
“မ သေ ပါ ဘူးကွာ … ချ စ် ချစ် ဖီးလ်တက်လာရင် ခံ နို င်မှာ ပါ …”
“အာ … မ သိတော့ဘူး … ကိုနော် … အရမ်းဆိုးတ ယ် … တော်ပြီ ပြန်ြ ကရေ အာင် ကွာ …”
ချ စ်ချ စ်က …ြ ပန် ချ င်ေ ပ မ ယ့် … ကျနော်ကတော့ မြ ပ န်ချ င် သေးဘူး … ဒါအမှန်ပဲ … ကိုယ်ချ စ်တဲ့ အပျိုလေး ရဲ့ အဖုတ်ကြီးကို နှိုက် … သူ့လ က်နု နု လေးနဲ့ … ကျနော့်ဒုတ်ကို … ဆွကစားပေးထားတော့ … မရဘူးဗျာ… ကျနော်
ချ စ်ချ င် သေးတယ် … အရှိ န်ကတက်ဆဲ … မာ န် ကတက်ဆဲ … သွေးကကြွဆ … ကျနော် ချစ် ချ စ် လည်တိုင်လေးကို န မ်း လိုက်တယ် … အန မ်း လေး ပျိုးလိုက်တာပေါ့ …
“အို … တော်ပါတော့ဆို …”
“ချ စ် ချင် သေးတ ယ်ကွာ …”
“အင်းလေ … ပြန်ကြ မယ်လေ …”
“မ ရဘူးကွာ … ချ စ်ချ စ် … ကို အရမ်းချစ် ချ င် နေ ပြီ …”
“ကျွတ် … အဲ ဒါ ကြောင့် … ကို့ကို အားမရတာ… အကင်းကို မပါဘူး …”
“အန် … ဘ ယ်လိုအကင်းမပါးတာလဲလို့ …”
“ကိုနော် … ဟွန့် … တြ ခား နေ ရာ သွားကြ မယ်ကွာ …”
“ဟာာ … အိုကေ … ချ စ် ချစ် … ရွှတ် … ဒါမှ တို့ချ စ် ချ စ်ကွ …”
ချ စ်ချ စ် … ရမက်ထန်ေ န မှာပေါ့… မိန်းကလေးတယောက်က … တခြားနေရာသွားဖို့ ပြော ရလော က်အော င် … ချ စ်ချ စ် စိတ်ထဲ… ဘ ယ်လောက်သွေြး ကွနြေ ပီလဲ … ကျနော့် စိ တ်ထဲမှာလေ … ချစ် ချ စ် ကို … အထင် မသေးဘူး … လုံးဝအထင် မသေးဘူး … ပွ င့် ပွ င့်လ င်းလင်း ပြော တတ်တ့ဲသူ့ကို … ကျနော် ပို ချစ်သွားမိတ ယ် … ပိုလဲတ န်ဖိုး ထားမိတယ် … ကျနော် ယူမှာ … သူနဲ့ တသက်လုံးအတူတူနေချ င်တယ်… ဒါအမှန် ပဲ …
“အဲ ဒီလို မကြ ည့်နဲ့ ကွာ …”
“အင်းပါ … မြ ကည့်ပါဘူး … အရ မ်းချစ်တ ယ် … ချ စ် ချ စ်ရယ် … ရွှတ် “
“ကိုက … ချ စ် ချစ်ကို အထင်သေးလားဟ င် …”
“တကယ်နော် … နောက်မှ “
“တကယ်ပါ ကွာ… အ ရ မ်းအလိုလိုက်တဲ့ ချ စ်ချ စ်ကို … ကိုက အရ မ်း ချ စ် … အာြး ကီးချ စ် … ရွှတ် … ရွှတ် …”
ြေ ပာ ရ င်းဆိုရ င်း … လက်က … ချ စ်ချ စ် ရဲ့ရင်သား ကို … ဆုပ်နယ်ပစ်လိုက်တယ် … ချစ် ချစ် ကျနော့် လ က်ကို … အတင်းပဲ ဆွဲခွာပြီး …
“ကိုနော် … အို … တော်ပါတော့ … တော်ကြာ မီးေ တွလင်းလာတော့မယ် …” “အင်းပါ ကွာ…”
ကျနော် စိတ်လျှော့လိုက်တယ် … ရုပ် ရှ င်ရုံထဲမှာ အချိ န်ြ ဖု န်း လို့ ဖြစ်တော့ ဘူး … ကျနော်တို့ … အဝတ်အစားတွေ သပ်သပ်ရပ် ရ ပ်ဖြစ် အော င် ပြင်ဆင်ြ ပီး … ချ စ်ချ စ် က … အိ မ် သာထဲ ဝင် သွားတယ် … ကျနော်လဲ ယော က်ျားလေး အိမ်သာထဲ သွားပြီး … ရှူရှူး တွေ ဘာတွေ ပေါ က် လိုက်တယ် … တော င်ေ န လိုက်တ့ဲဟာ … ကျနော့်ဒုတ်က တော်တော်နဲ့မကျ ဘူး ဗျာ… အရမ်းတောင်ေ နရ င် … အြ ပင်ထွက်ရင် ကျနော် ဒုက္ခရော က်မယ် … စိတ်ကိုနဲနဲလျှော့လိုက်တော့မှ … ဒီကော င်က ပျော့ကျ သွားတယ် … ဒါတောင် … သိပ်ေ ပျာ့ချ င်တာ ဟုတ်ဘူး … မိ န်းကလေး အိမ်သာရှေ့ မှာ … ချ စ်ချ စ် စော င့် နေ တယ် … မျက်နှာ လေးက … ပ န်း ဆီေ ရာ င်လေးပြေး နေတယ် … ကာမအထွဋ်အထိပ် ရောက်သွားတဲ့ … မိ န်းကလေးရဲ့ မျ က်နှာပြင်က … တမျိုးပဲ ဗျာ … ကျနော် အ ရ မ်းကြိုက်တယ်
… တခြားအချိန်တွေ ထ က် … ဒီအချိန်က … မိန်း ကလေးတွေ ပိုလှတယ်လို့ ခံ စားရတယ် … ကျနော်တို့ လက်ချင်း ချိ တ်ပြီး … ရုပ် ရှ င်ရုံထဲက ထွက်လာခဲ့တယ် …
“ကို … ဘယ်သွာြး က မှာလဲဟင် …”
“အင် … ဟုတ်သားပဲ … ကိုတို့ ဘ ယ်သွားကြ မှာ လဲ…”
“မ နော က်နဲ့ေ နာ် …”
“ချ စ် ချစ် အိ မ် သွားမလား …”
“အင် … ကော င်း သား ပဲ … ပါပါ နဲ့တွေ့မှ ဟုတ်ေ ပြ့ ဖစ်ရော …”
“အဟိ … စတာပါကွာ … ကို့အိမ်ကို သွားကြမယ်လေ”
“အင်း … သွားလေ …”
“ရ င် တွေ ခုန် လားဟင် …”
“ခု န်တာေ ပါ့ …”
“ကို့ကို အရ မ်းချစ်တာပဲလား”
“ကိုကရော … ချစ် ချ စ်ကို မချစ်ဘူး လား”
“ချ စ်တာပေါ့ … အရမ်းချ စ် တာပေါ့… တို့တွေ တသက်လုံး အတူနေကြမယေ် နာ် …” “အင်းပါ … လ က်တွဲမဖြုတ်ြေ ကး”
အိုကေ ဆိုပြီး … ကျနော့်လက်မောင်း က … ချ စ်ချ စ် နို့လေးကို … ဖိထား ပစ် လိုက်တယ် … လက်ချင်း ချိ တ်လျှော က်တော့ … သူ့မျ က်နှာ လေး ရဲ တက်သွားတယ် … ကျနော့်ကို သူ မေြာ့ က ည့်တယ် … ကျနော် မျ က်စိ မှိတ်ပြလိုက်တယ် …
“ကိုနော် … တော်တော်ဆိုး …”
“ချ စ်လို့ပါကွာ…”
ချ စ်လို့ ပါ ကွာဆိုပြီး … ချစ် ချစ် နို့အုံတ င်းတင်းလေးကို … လက်မောင်းသားနဲ့ဖိချေ ပစ်လို က်တယ် … ချစ် ချ စ် …
ြေ ခလှမ်း ပျ က်သွားတယ် … အမှ န်က … သူ တွန့်ကနဲြ ဖစ်သွားတာ … ယားတ က်သွားတယ်နဲ့ တူပါ ရဲ့…
ကျနော်လဲ အမှ န်တို င်းပြောရရင် ဖီးလ်တက်တယ်ဗျ … ချ စ် ချစ် နို့သီးလေးက ဘ ရာစီ ယာအောက်မှာ ထောင်ြ ပီးတင်းေ နတယ်လို့ ခံ စားမိ တ ယ် … ကျနော်တို့ လျှောက်လာရင်း … ဖ ရေ ဇာ နား ရော က်တော့ …
“ကို … လက်ချ င်းဖြုတ်လျှောက်ရေ အာင်နော် …”
“အန် … ဘာလို့လဲ …”
“ဒီနားမှာ … ပါပါ အသိတွေ ရှိတယ် …”
“ေ အာ် … အင်း …”
ချ စ်ချ စ်လ က်ကို မလွှတ်ချ င် ပဲ လွှတ်လိုက်ရတယ် … အသိတွေ ရှိ တယ်ဆိုတော့လဲ … ဟုတ်တာပဲ … တော်ကြာ သူ့အိ မ်က သိသွားမြှ ဖင့် … မိုးမီး လော င်လိမ့် မယ် …
“ကို့အိမ်က ဘယ်မှာ လဲဟ င် …”
“၂ ၇ လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာ …”
“ေ အာ် … အင်း … ကို … ချစ်ကို လှည့်မကြ ည့်နဲ့ နော် …”
ကျနော်ရှေ့က လျှော က်သွားတယ် … ထ င်တ့ဲအတိုင်းပဲ … လျှပ် စ စ်ဆိုင် ဆိုင်တ ခုေ ရှ့ရောက်တော့… ကုလားကြီးတ ယောက်က ချ စ် ချ စ်ကို … လှမ်းေ ခ်ါတယ် …
“ဟေးး … ဂျူလီယာ …”
ကျနော် လှည့်ကြည့်မလို့ပါပဲ … သူ့အသိက လှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတာသေချာနေတော့… ကျနော် လှည့်မကြည့်ရဲ ဘူး
… ကျနော်ေ ဖြးြေ ဖးပဲရှေ့ ဆက်လျှော က်သွားပြီး … မီးပွို င့် မှာ ရ ပ် စော င့် နေ မိတ ယ် … နဲ နဲြ ကာတော့မှ … ချစ် ချ စ် … ခ ပ်သုတ်သုတ်နဲ့နော က်က လိုက်လာတယ် … ကျနော် အေးဆေးပဲ … ၂၇ လမ်းထိပ် ရော က်တော့ … လမ်းထဲ ကို … ချိုးကွေ့လိုက်တယ် … ချ စ် ချ စ်လဲနောက်ကနေ လိုက်လာတယ် … ကျနော်နေတဲ့တိုက်ကို ရော က်တော့ … အေ ပါ် တ က်သွားတယ် … ပထမ ထပ်မှာ ကျနော် ရ ပ်ေ စာ င့် နေလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် … အပေါ်ကို တက်လာတ ယ် … ကျနော် ချ စ်ချ စ်ကို လက်လေး က မ်းပေးလိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် ကျေ နာ့်လက်ကို ဆွဲပြီး အေ ပါ် ကို ဆက်တက်လာခဲ့ တယ် … လှေခါးခွ င် အကွေမှာ့ …. ကျနော် ခွိကနဲ ရီလိုက်မိတယ်… ချ စ် ချ စ် လဲ ရီတ ယ် …
“မ ရီ နဲ့ ကွာ … ဟွန့် …”
“အင်းပါ … မ ရီတော့ဘူး … ခွိ”
“တွေ့လား … တော်တော်ပျော်ေ နတ ယေ် ပါ့လေ …”
“အင်း … အ ရ မ်းပျော်တယ် …”
“ချ စ် ချစ်ကတော့ ရင် တွေ တုန် နေတယ် …”
“ဘာလို့လဲဟင် …”
“ကြောက်လို့ေ ပါ့…”
ကျနော် နေတာက …ြေ ခာ က်ထပ် … အိ မ်မှာ က ဘယ်သူမှ မ ရှိဘူး … ကျနော်တယောက်ထဲ နေတာလေ … ကျနော်က အင်း သား … အဖေက လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိ အောင် ဆြို ပီး … ရန် ကုန် မှာ ကျော င်းလာ တက်ခို င်းတာ … ကျနော် အ ခ န်းတံခါးကို ဖွ င့်လိုက်တယ် …
ချ စ်ချ စ် … တံခါးေ ရှ့ မှာ တုံ့ဆိုင်း တုံ့ဆိုင်းနဲ့ … ချီ တုံချတုံ ဖြစ်နေတ ယ် … ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ဆွဲပွြေ့ ပီး … ကျ နော်အခန်းထဲ ခေါ်လာပြီး … တံခါးကို ဆွဲပိတ်လိုက်တ ယ် … ဂျောက် …
“ကိုက … တယောက်ထဲ နေတာလားဟ င် …”
“အင်းလေ … ရ န်ကုန် မှာ ကျော င်းလာတက်တာ …”
“အွ န် … တခန်းလုံး ရှု ပ် ပွ နေတာ ပဲ …”
“အဟဲ … လူပျိုဆိုတော့ …”
“အံ မယ်လေး … သိပါ တယ်ေ နာ် … နံ ဟောင် နေတာပဲ … အနွ် … ဒါကြီးက ဘာလဲ …”
“အဟီး … မလျှော်ရသေး တဲ့ အတွ င်းခံ ဘောင်းဘီ … “
“အားကြီး ည စ် ပတ်တာပဲ … ဟွန့်”
“မညစ် ပတ်ပါဘူးကွာ …”
“အို … ကိုေ နာ်… အတင်းမ ဖက်ထားနဲ့ကွာ”
“ချ စ် ချင်လာပြီ … ချ စ် ချစ် ကလဲ”
“အို …ြေ ဖြး ဖးဆို … အဲ ဒီလို မ ချွတ်နဲ့ လေ …”
“ဒါဆို မြန်ြ မ န်ချွတ် …”
“ဟွန့် … တအားအနို င်ကျင့်တာပဲ … ငို ချင်လာပြီေ နာ်”
လက်တုန်တု န် နဲ့… အြ ဖူရောင် ရင့်စေ့အကျငေ်္ီလးကို တလုံးချ င်း ချွတ်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရဲ့ထွားစို့တဲ့ နို့အုံ လေးက
…အဖြူရော င် ရင် စေ့ အင်္ကျီလေးေ အာက်မှာ … မို့ မောက်နေတ ယ် … ကျနော် ချ စ်တယ် … ကျနော် မနေ နို င်တောဘူ့း … ချ စ် ချ စ်ရဲ့နို့ အုံ ၀ င်းဝ င်း လေးကို မြင်လိုက်တာနဲ့ … ကျေ နာ့်စိတ်တွေ ထိန်း မ ရ တော့ဘူး … စွေ့ကနဲ ချ စ် ချစ် ခါးလေးကို ဖက်ပြီး … ကျနော့်အ န မ်းတွေ က … ချ စ် ချ စ်နို့ အုံ နှ စ် မွှာကြားထဲ … ဝဲပျံသွားတယ် … ချ စ်လိုက်တာ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် …
“အို … ကို့ … ယားတယ် … ဟိ”
ကျနော့်ရဲ့နှုတ်ခမ်း မွှေးစစလေးတွေက … ချ စ်ချ စ်တကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းစေသ လားမသိ … ချစ် ချ စ် … ကြက်သီးတွေြ ဖန်းဖြန်း ထပြီး မျ က်နှာလေးရဲတ က်လာတယ် … ကျနော့်နှု တ်ခ မ်းတွေက ချစ် ချ စ် ရဲ့
နို့အုံ နှ စ် မွှာကြားထဲ … အတင်းပဲ ဖြိ ပီး န မ်းပစ်လို က်တယ် … ချစ် ချ စ် ခါးလေး ကော့တက်လာပြီး … နို့ အုံ လေးက မို့တ က်လာတယ် … ကျေ နာ့်လက်တ ဖက်က … ဘရာစီယာကို အတင်းဆွဲဖယ်တယ် …
“အို …ြေ ဖြးေ ဖးဆို … ဖြု တ်ေ ပး မယ်ကွာ …”
“အင်း … အင်း …”
ဘရာစီယာကြိုးလေးကြေ ပလျော့ သွားတယ် … ကျနော့်အ န မ်းတွေက အဆက်မြ ပတ် တိုးဝ င်သွားပြီး … ဘရာစီယာ အုပ်ထားရာ ကနေပေါ် လာတဲ့ … နို့ သီးခေါ င်းေ လးကို … လှမ်းဟပ်လိုက်တ ယ် …
“အ … ကို … ကို … ကျွတ် …”
နို့သီးေ ခါင်းလေးက … ထောင်ပြီးတင်းနေတာပဲ … နှုတ် ခမ်း လေးနှစ် ခုနဲ့… ကိုက်ပြီး … လျှာ လေးနဲ့ တို့တို့ေ ပးလိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ရှီးကနဲအော်ပြီး … ကျနော့်ေ ခါ င်းကို အတင်းဖက်ထား ရင်း …ခေါ င်းလေး ဆတ်ကနဲ မော့ေ မာ့သွားတ ယ် … ခါးလေးက ကော့ကော့တ က်လာတယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ် ရဲ့အဖုတ်ကြီးကို … အနီရော င် ထမီပေါ်ကေ န အု ပ်ကိုင် လိုက်တ ယ် … ချ စ် ချ စ် … တွန့်ကာလိမ်ကာနဲ့… ဒူးလေးညွှတ်သွားတ ယ် … ကျနော် လှမ်းထိန်းထားရင်း … မွေယာပေါ့်ပွေ့ ချြီ ပီး ခေါ်လာခဲ့တယ် … ချ စ်ချ စ် မျက် နှာလေးကလေ … ပ န်းေ ရာင်သ မ်းပြီး ချစ် သွေးကြွေ နသလိုပဲ … ကျနော် အရမ်းချစ်တယ် … မွေ့ယာပေါ်ရောက်တော့… ချ စ်ချ စ် မျ က်စိ လေး မှိ တ်သွားတယ် … ကျနော်ကတော့ လုပ် စရာ ရှိတာ လုပ် ရမှာ ပေါ့… ရ င်စေ့ အင်္ကျီလေးကို … ကျနော် တ လုံး ချ င်း ချွတ်လိုက်တယ် … အင်္ကျီလေးက ဟ သွားတော့ …ြေ ပလျော့ေ န တဲ့ ဘရာစီယာလေးအော က်မှာ … ရ င်သားဆိုင်တွေ က … မို့ မော က်ကာ ပြူးထွက်ေ န တ ယ် … ကျနော် တချက် န မ်းလိုက်ပြီး … အင်္ကျီ တွေ ကို ချွတ်လိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် အလိုက်သင့်လေး … အင်္ကျီချွတ်ပေးတယ် … ဘရာစီယာ ရော ပေ့ါ … တင်းြ ပီးမို့နေတဲ့ နို့ အုံ လေးက …ြ ဖူဝ င်း နေတာ ပဲ … နီ တာရဲ နို့သီးေ ခါင်းလေးက … ကျနော်က တအားစို့ထားလို့လားမသိ… ပ န်းသွေးရောင် ရဲ ရဲ ထေ နတယ် … အပေါ်ဝတ် တွေ ကျွတ်သွားတော့ … အော က်အဝ တ်ေ ပါ့… ချ စ်ချ စ် မျက်စိ လေး မှိတ်ထားတယ် … ကျနော် ချ စ်ချ စ် ခါြး ကားက အနီ ရောင်ထမီ လေးရဲ့အထ က်ဆင်ကို ချွတ်လိုက်တယ် … အောက်ကို လျှော ချ လိုက်တော့ … ချ စ်ချ စ် … တင်ပါး လေးြ ကွပေးရှာတ ယ် … ပေါင် တံနှ စ်သွယ်က … တ င်းတင်းရ င်းရ င်း နဲ့ …ြ ပည့်ပြည့်ြ ဖိုးဖြိုး ရှိတာေ ပါ့… ကျနော်ပေါ င်တွင်းသားလေးကို … လက်နဲ့ ပွ တ်သပ်လိုက်တော့ … ချစ် ချ စ် … ကြက်သီးဘုလေးတွေ ထလာတယ် … အတွင်းခံ လေးအော က်က … အဖုတ်ကြီးက ရု န်းကြွလာတယ် … ကျနော်တို့ ဘာမှ မပြောြ ဖ စ်ကြဘူး … ပြောစ ရာလဲ မလိုတော့ဘူးလေ … ခ ရီး ဆုံးကို … လက်တွဲ လျှောက်မယ့် ချ စ် သူတွေ ပဲ လေ … ချ စ်ချ စ် ရဲ့အဖုတ်ကြီးပေါ်မှာ … အနမ်းလေး ကျနော်တပွင့် ချွေချလိုက်တယ် …
ဆတ်ကနဲ တုန် ခါတ က်သွားတဲ့ ပေါ င်တွင်းသားတွေကို … အ သာသ ပ်မြှူရင်း … ကျနော် နော က်တခါ ထပ်နမ်းလိုက်တ ယ် … တကယ်ပါ ပဲ … ချ စ်ချ စ် မခံ စားနို င်လို့ထ င်ပါ ရဲ့… ခါးလေးက ကော့တက်လာတယ် … အဖုတ်ကြီးက … မျက်စိရှေ့မှာ ပဲ မောက်တ က်လာတ ယ် … ကျနော် န မ်း တာပေါ့ … ထပ်ခါ ထပ်ခါအဆက်မပြ တ်ပဲ … အ တွင်းခံေ ပါ် က နေ … နမ်းလိုက် … အဖုတ်ကြီးရဲ့နှု တ်ခ မ်းသားေ တွ ကို … ကျနော့် နှုတ်ခမ်းနှ စ် ခု နဲ့… ဆွဲ ခဲ လိုက် … လုပ်ချ င်တိုင်း လုပ်နေတော့တာပဲ လေ … ချ စ် ချစ်ကလဲ မျ က်စိ တောင် မဖွ င့် တော့ဘူး … ဖီးလ်တက်နေတဲ့ လေသံလေးအဟင့် အဟင့်နဲ့… ခေါင်းအုံး စ လေးကို အတင်း ပဲ ဆွဲဆုပ်ထားတယ် … ကျနော်… ချ စ်ချ စ်ရဲ့အတွ င်းခံ လေးကို အသာလေး ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … အဖုတ်ကြီးက အရည်တွေစို ရွှဲေ နတော့ … အတွ င်းခံ လေးက ကပ်ချင် ချ င်ြ ဖ စ်နေတယ် … ဒီကလဲ ဘ ယ်ရ မလဲ…ြေ ဖးေ ဖြး ချ င်းပဲ ချွတလိုက်တာ ပေါ့် … လှလိုက်တဲ့ အဖုတ်ကြီးဗျာ … အေ မွှး လေးရေး တေးေ တးနဲ့ … တင်းပြည့်ဒင်ြ ပ ည့် ချ စ်ချ စ် ရဲ့အပျို အ ဖုတ်ကြီးလဲ တွေ့ရော … ကျနော် ပြေးဟပ် တော့တာပဲ … ပေါ င် နှစ်ချောင်းကို အတ င်းကား … ဖ တ်ကနဲ ဟသွားတဲ့အကွဲကြောင်းအတိုင်း … လျှာကို ခ ပ် တ င်းတင်း … မြှုပ်ြ ပီး … အထက်အောက် ပွ တ်ဆွဲပ စ်လိုက်တယ်
“အို … အို … ကို့ … အိ … “
“ဟင့် … မာ မားေ ရ … ထိတယ် … ထိတယ် … ကျင်လိုက်တာ … ကိုရယ် … ရှီးးးးးးးး” “အို … ဟင့် …”
“ကျွတ် … ကျွ တ် …”
ချ စ်ချ စ် အတင်းရု န်းတယ် … အဖု တ်ကြီးက … လျှာရဲ့ ဒဏ်ကို ကြောက်တာပေါ့… လွတ်လိုလွတ်ညား ဘယ်ညာ ယမ်းခါ ကြည့်တ ယ် … အထက်အော က် … ကော့တ င်ပေးတယ် … မ ရပါ ဘူးလေ … ချ စ် ချ စ် အဖု တ်ကြီး ရွှေ့ ရာ ကို … ကျနော့် လျှာက ကြို သိနေသလိုပဲ … အဖုတ်ြ ကီးက အပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုရ င် … ကျနော်က အပေါ် နားက ကြိုစော င့်ြ ပီး … အတင်း လိုက်ယက်တ ယ် … ဒီတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ … အဖု တ်ကြီးက အောက်ကို
ဝုတ်ကနဲကျသွားတော့လဲ … ကျနော်က အသာေ လးပဲ လေ … နှုတ် ခမ်းသားတခုကို ခဲြ ပီး လိုက်သွားတာပေါ့ …
အရည်တွေလား … ထွက်တာပေါ့… ကျနော်ကတော့ မ ရွံပါ ဘူး … ကိုယ်ချစ်တဲ့သူမို့ လို့ … အားရပါးရ ယက်ပ စ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ ချ စ် ချ စ်က သန့် ပါတယ် … အနံ့အသက်မ ရှိ ဘူး … ခ ပ်စူး စူးလေး ချ ဉ်တာကလွဲလို့ပေါ့ … ဒီအရသာလဲကျနော်ကြို က်တာပဲ … ဘီယာလိုပဲ … ကျနော် ခ ပ်ြ မှင်းြ မှ င်းလေး … အကွဲကြောင်းကို … စု ပ်ပစ်လိုက်တ ယ် …
“အားးး … ကို … ကို … တော်ပါ တော့ … အဲ ဒီလြို ကီးတော့ … ဟင့် …”
“အူးး … မ ခံ နို င်တော ဘူ့း … ကိုရယ် … တော်ပါေ တာ့ …”
မခံနို င်ဘူးသာဆိုတ ယ် … ချ စ် ချ စ် အဖု တ်ကြီးက … ဓါတ်လိုက်သလိုပဲ … ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ … ကော့ကော့တက်လာတယ် … အကွြဲေ ကာင်း လေးက ပိုဟမလာတဲ့အြ ပ င် … ပို တောင်ကျုံ့သွားသေးတယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ်ပေါ င်နှ စ်ေ ချာင်းကို ဆွဲမြှောက်လိုက်ပြီး … ဒူးကို ပြန်ကွေး… ခပ်ကားကားလေး ရင်ဘတ်မှာ အပ်လိုက်တယ် … ဒီတော့မှ … ချ စ်ရ ည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ … ချ စ် ချ စ်ရဲ့အဖု တ်အကွြဲေ ကာင်ြး ကီးက ဘွားကနဲ … ပေါ်လာတယ် … ကျနော် … အားရပါးရြ ပုံးလိုက်မိတယ် …
ရှလွတ်ဆို … ကျနော့်လျှာက အကွဲကြောင်းအတိုင်း အပေါ်ကို ပ င့်တင်ြ ပီး ယက်ပ စ်လိုက်တယ် …
“အို … ကို … ကို့ … အရမ်းကြီး … ဟင့် …”
“အီးးး … သေပြါ ပီ ကိုရ ယ် … အားးးးးး …”
ဒီလိုမျိုး နှုတ်ခ မ်းသားနှစ် ခုကို ဆွဲဖြဲလိုက်မှ … ချစ် ချစ် ရဲ့ေ စာ က်ေ စ့လေး … ငေါက်ကနဲ ပေါ်လာတယ် … ထောင်နေတာပဲ … ချ စ် ချ စ်အစေ့က နဲ နဲ တော့ြ ကီးတယ် … ခဲ တံထိပ် ဖျားက ခဲ ဖျ က်တံးလောက်ရှိ မလားပဲ … မဟားတရား စိတ် တွေ ကြွတ က်လာတော့ … ကျနော် ငြုံ ပီး စု ပ် ပ စ်လိုက်တယ် … ဝု န်း ဆို … ချ စ်ချ စ်ဖင်ကြီးက
မွေ့ယာနဲ့ တထွောလောက်ြေ မာကတ က်လာပြီ်း … အတင်း ပဲ … ကော့တယ် … မ ရဘူး … သူ့မှာ ထောက်အား မ ရှိဘူး … ခြေ ထောက်ေ တွက လေထဲမှာ ရု န်းကန်နေတယ် … ကျနော်သိပါတ ယ် … ချ စ်ချ စ် မိုးမွှ န် အောင် … စိတ်တွေြ ကွ နြေ ပီ … အရည်တွေကလဲ တစိမ့် စိ မ့်နဲ့ … တာကျိုးသ လားမှတ်ရတယ် … ပြွတ်ကနဲ … ပြွတ်က နဲ ထွက်ကျလာတယ် … ခပ် ပျစ် ပျ စ် အရ ည်တွေ ကို … ကျနော် အားရပါးရ စုပ် ပ စ်လိုက်တယ်ဗျာ…
ချ စ်ချ စ် … တ အားစိတ်ြ ကွလွ န်းလို့ထင်တာပဲ … အတင်း ပဲ လူးလဲထတယ် …
“ချ စ် ချစ် … ဘာဖြစ်လို့လဲဟ င် …”
“ကို … အ ရ မ်းဆိုးတယ်ကွာ …”
ချ စ်ချ စ်လ က်က … ကျနော့် အဝတ်တွေကို … လှမ်းချွတ်တယ် … အမြ န်ဆုံးနည်းနဲ့ ချွတ်ချလိုက်ပြီး … ကျနော့်ကို မွေ့ယာပေါ် တွန်းချ လိုက်တယ် … အောက်က ကောင်လား … ထောင်နေ တာပေါ့ … တင်းနြေ ပီ … နောက်ထ ပ် ၁၀ မိ နစ် အတွ င်း သာ … ပြီးအောင် မလုပ် လို့ကတော့ … ကျနော့်သွေြးေ ကာတွေ ပွ င့်ထွက်ကုန် တော့ မယ် … ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ဒုတ်ကြို က ည့်ြ ပီး … နဲ နဲ တော့ လန့်သွားတယ် … အာေ မဋိတ်အသံလေးနဲ့ …
“အို … အကြီးကြီးပဲ …”
“အဲ ဒါ ချ စ် ချ စ်အတွ က်…”
“တော်ပါ … ထမလာနဲ့ … အိ ပ်နေ”
ချ စ်ချ စ် … ဘာလုပ်မလဲ … ကျနော် အရ မ်းသိချ င် တာပဲ … ဆတ်က နဲ … ကျနော့်ဒုတ်ကြီးကို … လှမ်းဆုပ်ြ ပီး … လေးငါး ချက်ခ ပ်ြ ပ င်ြး ပင်း လေး ထုေ ပး လိုက်တယ် …
“အား … ရှီးးး…”
ဒီတခါ အော် ရတာ … ကျေ န်ာပဲ …ြေ ဖာင်းကနဲြေ ဖာင်းကနဲ … သွက်သွက်လေးထုပေး လိုက်တော့… ကျနော့်ဒုတ်က အစွ မ်းကုန် ကားတက်လာတယ် … ချ စ် ချစ် … ကျနော့်ကိုယ်ကို ခွ လိုက်တယ် … မို့မောက်နေတဲ့ ရင်နှ စ် မွှာနဲ့ … သွေးကြွနေတဲ့ချ စ်သူလေးက … တက်ခွ လိုက်တော့ … လုပ် လုပ် …ြ ကိုက်တာသာ လုပ် တော့ … ချ စ်ချ စ် ရေ … ကို အြံ ကိတ်ပြီး ခံ မယ် … ချ စ် ချ စ် … ဒိုင်းကနဲ မျက်စော င်းထိုးြ ပီး …
ကျနော် မျက်စိတ ဖက်မှိတ်ပြီး … ခိုးကြ ည့်တယ် … ချစ် ချ စ်ဘာလုပ် မလဲတအား သိချ င်တာပဲ …
“တွေ့လား … ခိုးမကြည့်ပါနဲ့ဆို …”
ကျနော် မျက်စိ မှိတ်လိုက်ရ ပေမယ့် … အရ မ်းသိချ င် တာပဲ … ပူ နွေးတဲ့ ချစ် ချ စ် ရဲ့အဖုတ်ြ ကီးက … ကျနော့်ဗိုက်ပေါ် မှာ ထိမိ နေပြီ လေ … အမွှေးနု နုလေးတွေ ရဲ့ပွ တ်သပ် နေတာကို ကျနော်သိတယ် … အရည်တွေစို ရွှဲနေတာလဲ ကျနော်သိတတ ယ် …
“သွား … ခိုးမကြည့်နဲ့…”
ဘေးက … ခေါင်း အုံးတလုံးကို … ကျနော့် မျ က်နှာပေါ် အု ပ် ချ လိုက်တယ် …ြ ပီးတော့… ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ကိုယ်ေ ပါ် မှာ မှော က်ချ လိုက်တယ် … ကျနော့်အမြ င် အာရုံ တွေ မှောင် မဲ သွားတယ် …
“အရမ်းချစ် တယ် … ကိုရယ်… ဟ င့် …”
လျှောကနဲ … ချ စ်ချ စ် ဖ င်လေးကို … က စားလိုက်တာလားမသိ… ချ စ်ချ စ်ရဲ့အဖုတ်ကြီးနဲ့ … ကျနော့် ဗိုက် ပေါ်မှာ အစု န် အဆန် … ပွ တ်ဆွဲသွားတယ် … ပြီးတော့ပြီးတော့ … မရ ပ်ဘူး … ကျနော့် ဒုတ် အလျားလိုက်အတိုင်း … သူ့အဖုတ်ကြီးနဲ့ ကပ်သွားတယ် … ကျနော် သိတယ် … ကောင်းလိုက်တာဗျာ… အဖု တ်ကြီးက … ဟတယ်ဆိုရုံ လေး အကွဲကြောင်ြး ကားထဲ … ကျ နော့ ဒုတ်က် အလျားလိုက် ကပ်သွားတယ် … ချ စ်ချ စ် … ဖ င်ကို တအားကစားပစ်လိုက်တယ် … ကျ နော့်ဒုတ်ကိုဗျာ … ပွ တ်ဆွဲပစ်နေတာများ… ကျနော့်တကိုယ်လုံး ထိန်းမ ရတော့ဘူးလေ … ထွန့်ထွန့်ကို လူးေ ရာ … ကျနော်လေ … ဒုတ်ကို ကော့ကော့ေ ပးလိုက်မိတယ် … မတော်တဆများ … ချစ် ချစ်အဖုတ်ကြီးထဲ … ဇွ တ်ဆို ၀ င်သွားမလားလို့ပေါ့ … လိုးချင်နြေ ပီ … ကျနော် အရမ်းလိုးချင် နြေ ပီ … ချ စ် ချစ်လဲ … ဖီးလ်တ အားတ က်ေ နတ ယ်ထင်တယ် … ကျနော့်ဒုတ် အလျားလိုက်အတိုင်း… သူ့အဖုတ်ြ ကီးနဲ့ ပွ တ်ဆွဲပြီးတော့ … ထိပ် ဖျားနားမှာ ခဏ ရ ပ်သွားတယ် … ဖတ်ဆို … ချ စ်ချ စ် အဖုတ်ြ ကီးက … ကျနော့ဒုတ် ထိပ် ဖျားကို … ငုံအု ပ်လိုက်တယ် … ကျနော်မြ မ င် ရပါ ဘူး … ဒါ ပေမယ့် … ခံ စားထိတွေ့ေ နရတယ် … လိုးပါ တော့ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် … သွင်းလိုက်ပါတော့ … ကျနော်ချစ် ချ စ် … ခါးလေးကို ကိုင်ြ ပီး … ဖိ ချ လိုက်မိတယ်
“အိုး … အဟင့် … အြ ကီးကြီးပဲ …”
“အီးးးး … ခ ဏလေး … ခ ဏလေး …”
တကယ်တန်း… သွင်းဆိုတော့ … ချစ် ချစ် ထိုင် မ ချ ရဲ ဘူးလေ … ကျနော့်ဒုတ် က ထိပ် ဖျား က ကွမ်းသီးလုံး ကြ ကီးတယ် … ချ စ်ချ စ် အဖုတ် နဲ့ေ တ့ပြီး … ပြွတ်ဆို … ကျနော်ချစ် ချ စ် ခါးကို ဆွဲချ ရင်း …
အော က်ကနေ … ဒုတ်ကို အစွမ်းကို … ကော့တင်ပ စ်လိုက်တယ် …
“အား … မာ မားေ ရ … အံမလေး … သေ ပါ ပြီ … သေပြါ ပီ …”
ဒုတ်ဒုတ် … ဒုတ်ဒုတ်နဲ့… တထစ်ချင်း … ကျနော့် လီးကြီးက .. ချ စ် ချ စ်အတွင်းသားလေးတွေကို …
ပွ တ်ဆွဲသွားတယ် … စိကပ်နေတဲ့ အတွ င်းလှိုဏ် ခေါ င်းလေးကို … ကျ နော့် ကွမ်းသီးခေါ င်းက ထိုးခွဲသွားတယ် … ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ကို အတင်း ဖက်ထားတယ် … ကားတက်နေတဲ့ ချ စ်ချ စ် ဖင် လေးက … လှုပ် တောင်မလှု ပ်ဘူး …
နာ မှာ ပေါ့… ကျနော့်ဒုတ်က … နဲ နဲတော့ြ ကီးတယ် … အံကြိတ်ပြီး … ဆောင့်ထိုင်လို က်တာ … ၀ င် တော့ ဝင်သွားတ ယ် … ဒါပေမယ့် မဆုံးသေးဘူး … လ က်သုံးလုံးလောက်လိုသေးတယ် …
“အီးးး … ကိုရယ် … တအာြး ကီးတာပဲ …”
“အရမ်းကောင်းတယ် ချ စ် ချစ် ရယ်… ရှီးးးး …”
“ဟင့် … တအားနာတယ်ကွာ … အို … အို … အို …”
ကျနော် အောက်ကနေ … ကပ်တိုးလေး … ညှောင့်ပေးလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် …
“ြေ ဖြးေ ဖး … ကိုရယ် … တ အားနာတ ယ် … ဟင့် …”
ကျနော် ချ စ် ချစ် … တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို … ပွ တ်ပေးတယ်… လ က်နှ စ် ဖက်နဲ့ဆုပ်န ယ်ပေးတယ် … ဖွ ဖွ လေးပဲ … ချ စ်ချ စ် ရဲ့နာ ကျင် မှု တွေ …ြေ ပလျော့သွားအော င် … ပွ တ်သပ် ပေး လိုက်တယ် …ြ ပီးတော့ မှ … ကျနော့်လက်ကို အားထည့်ြ ပီး … ချစ် ချစ် … တင်ပါးလေးကို … ဖိ ချ ပ စ်လို က်တယ် …
“အမလေး … မာမား ရေ … ဂျူလီယာ … မ ခံနို င်ဘူး … သေပြီ .. သေပြီ အားးးးးးးးးးး”
ချ စ်ချ စ် အဖု တ်ကြီးထဲကို … ကျနော့် လီး ဝင်သွားပြီ ဗျ … တကယ်ဝင်သွာြး ပီ … ကြားမှာ ရှိတ့ဲအတားအဆီးတွေကို … ကျနော့် ကွမ်းသီးခေါ င်းက … ထိုးခွဲသွားတယ် … အပျိုဆိုတာ သေချာပါ တယ် … လျောလျောရှူ ရှူ
ဝင်သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ … ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့… ၀ င်သွားတာ … ၀ င်သွားတော့လဲ … အတင်း ပဲ ညှစ်ထား တ ယ် … အဆုံးထိဝ င်သွားတော့ … သူရဲ့ ဆီးခုံလေးနဲ့ ကျေ နာ့်ဆီးခုံ ကပ်သွားတ ယ် … အပေါ်မှာနေတော့ … ချစ် ချ စ် ပို နာမှာ ပေါ့… ကျနော့်ကို အတင်း ဖက်ထာြး ပီး … ငြီးတွားနေတယ် … နာကျင် မှုတြွေေ ပ လျော့သွားအော င် … ကျနော် ဒီအတိုင်း ပဲ ငြိ မ်ြ ငိ မ် လေး နေ လိုက်မိတယ် … ပြီးတော့ ချ စ် ချ စ် ကျောလေးကို အသာအယာ ပွ တ်သ ပ်ေ ပး မိတယ် …
“ကိုရယ် … အရ မ်း နာတယ် … ဟင့် …”
“အစမို့ပါ … ချစ် ချ စ် ရယ်ေ နာ် …”
“ဒီအတိုင်း ပဲ နေမယ်ကွာ … မလှုပ်နဲ့… အ …”
ကျနော်ခေါ င်းအုံးကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး … ချ စ် ချ စ် နှုတ်ခမ်းလေးကိုလဲ ငုံ နမ်း လိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် နာ လွ န်းလို့ထင်တယ် … မျက်ရည် လေးတွေတောင် ဝဲနေတယ် … ချ စ်ချ စ် ရယ် … တင် ပဆုံက တင်သားလုံးလုံးလေးတွေကိုလဲ … ပွ တ်သပ် ချေ မွပေးလိုက်တယ် … တော်တော်ကြာမှ … ချ စ် ချ စ် လူးလွန့်လာတယ် … ချစ် စိတ်လေး သွေးတက်နေတော့ … သူလဲတကယ်ခံ ချင် ရှာာ မှာ ပေါ့… ကျနော် ငြိ မ်ြ ငိမ် ပဲ နေပေးလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ဆီးခုံလေး ကို ကြွတယ် …ြေ ဖးေြ ဖးလေး … ပြီးတော့ … ဟင့်ကနဲ … ပြန်အိကျလာတ ယ် … ကျနော့်ဒုတ်ရဲ့ပွ တ်တိုကက်မှု ဒဏ်ကို … သူ တကယ်မ ခံ စားတတ်သေးဘူး … မခံစား နိုင် သေးဘူးထ င်တ ယ် … ဒါပေ မယ့် … ချ စ်ချ စ် … ဇွဲမလျော့ ဘူး … နောက်တတခါ ထပ်ြ ကွတယ် … အိကနဲ … ဆီးခုံ ချ င်း ပြန်ကပ်လာတ ယ် … ချ စ်ချ စ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက် … မျ က်နှာလေးက … အပေါ်မေြာ့ ပီး… အားယူကာ … ထပ်ထတယ် … ခ ပ်တင်းတ င်းပဲ … အဖု တ်ကြီးက ဆွဲညှစ်ထားရင်း … အေ ပါ် ကို ကြွတက်လာတယ် … ပြီးတော့ … ဆတ်ကနဲ ထိုင် ချလိုက်တ ယ် … ချစ် ချ စ် မျက်နှာလေး ရှုံ့ မဲ့သွားတယ် … ဒါပေမယ့် … မ ရ ပ်ဘူး … ခံ စားချ က်တွေက … တဒိန်းဒိန်းနဲ့ … သွေးကြွလာတယ် …
“ဟင့် … နာ လိုက်တာ …”
“အား … ကောင်းလိုက်တာ … ချ စ် ချစ်ရယ် …”
“အို … နာ ပါ တယ်ဆို …”
“အီးး … အ ရ မ်းညှစ်ထားတယ် … ချစ် ချစ် … ဖြေးြေ ဖး …”
ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ … ချ စ် ချစ် … သုံးချက် ဆင့်ြ ပီး ကပ်ေ ညှာင့်ပေးတယ် … တမျိုြး ကီးပဲဗျာ … တကယ်ကို တမျိုးကြီးပဲ … ကျနော့်ဒုတ်ကို … အတင်းညှစ်ပြီး … က ပ်တိုးေ လး ညှောင့်ေ ပးတဲ့ ချ စ် ချ စ်ရဲ့ညှော င့် ချ က်မှာ … ကျနော် ဘယ်လိုေ နရ မှ န်းမသိတော့ပါဘူး … ကျနော် အတင်းပဲ ကော့ပေးလိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် ထိသွားတ ယ် …
ပြန်အကျမှာ … ကော့ေ ပး လိုက်တော့ … ရုတ်တရက် ပြန်ကြွတက်သွားတယ် …
“အို … ကို့ … နာ တယ် … အီးးး …”
“ဟင့် … ရှီးးးးးးးးး”
ပြန်ကြွသွားပြီး … ပြန်ကျလာတယ် … ဒီလိုနဲ့ … စီး ချက်လေးက မှ န်လာတ ယ် … ငြီးသံလေးကတော့ …
ဆူညံနေတာပေါ့ … ဖီးလ်တအားတက်တ ယ်ဗျာ … ချစ် ချ စ် ရဲ့အဖုတ်ကြီါ်က … တကယ်ပဲ … ညှစ်အား သန်တယ် … ညှစ်ညှစ်ြ ပီး ဆောင့် ဆောင့်ချတဲ့ … ချ စ်ချ စ် ရဲ့ဆောင့် ချက်တွေ အော က်မှာ … ကျေ န်ာကလဲ ကော့ကော့ပေးပြီး … စီး ချက်ညီအော င် ညှိေ ပးတ ယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ် ခါး လေးကို ကိုင်ြ ပီး … ချ စ်ချ စ် ဖ င် လေးကို …ဝေ့သွားအောင် … ဆွဲဆွဲ မွှေ့ တယ် …
“အာ … ဟင့် …”
ချ စ်ချ စ် … ဖင် လေးကို … ဆတ်ကနဲ … စကောဝိုင်းလိုဝေ့လိုက်တယ် … ကျနော့်ဒုတ်ကို … အတင်းကော့ ထားပေးလိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … စီးကြ ပ်ေ န တဲ့အဖုတ်ကြီးက … ကျနော့်ဒုတ်ကို … လိမ်ြ ပီး ညှစ် သွားတာ … အရမ်း မိုက်တယ် … ချစ် ချစ်က တော့အေ ပါ် မှာ ကော့ပျံနေတာ ပဲ …
“ကိုရယ် … ကိုရယ် … ဟင့် …”
“ကောင်းလိုက်တာ ချ စ်ချ စ် ရယ် …”
ချ စ်ချ စ် … စကောဝို င်းလိုမွှေ့လိုက် … သုံးလေးချက်လော က် … ဆက်တိုက်ဆော င့်လို က် … ပြန် မွှေ့လိုက်နဲ့ … ကျနော့်အပေါ်မှာ … မြင်းစီးနေတာ … အရည်တွေ … ရွှဲ ရွှဲ စြို ပီး ထွက်ကျတဲ့အထိပါ ပဲ … ကျနော်လဲ ဖီးလ်တ အားတ က်တယ်ဗျာ… ပြီး တော့မယ် … ပြီးတော့မယ် … ပြီး ခါ နီးလေး … ကျနော့်ဒုတ်က အ စွ မ်း ကုန် ကြီးပွလာလေ … ချ စ်ချ စ်အော်ဟစ်ြ ငီး တွားရင်း … ခ ပ်ြ ပ င်းြ ပ င်း လေး … ဆော င့်ချ လိုက်တယ် …
“အားးးး … ကော င်းတယ် … ကောင်းလိုက်တာ … ချ စ်ချ စ် ရ ယ် …” “ပြွတ် …”
“အားးး … မာမားေ ရ … ဂျူလီယာ … သြေ ပီ … သြေ ပီ … အီးးးးးးး”
ဖတ်ဇတ်တုန်အော င် … ကျနော်ယမ်းခါရင်း … လီးြ ကီးကို … အစွ မ်းကုန် ကော့ထားပေးရ င်း … ဒုတ်ထဲက အရည်တွေတပြွတ်ြ ပွ တ်နဲ့ ထွက်သွားတ ယ် … ချ စ် ချ စ် နာလွ န်း တာလားကောင်းလွန်းတာလားမသိ … ကျနော့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … အတင်းဖက်ထားရင်း … သူ့အဖုတ်ကြီးကို … အားကုန်ညှ စ်ချ လိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာ … ချ စ် ချစ် ရယ် … အရည်တွေ တစက်မကျ န်တဲ့အထိ … ချ စ် ချစ် လေ … ညှစ်ထားဆဲ … အပေး ကောင်းလွန်းတဲ့ ချ စ် ချစ်ကို … ကျနော် တအားချစ် မိသွားတယ် … ချစ်ချ စ်လဲ ပြီး သွားတယ်ထင် ပါရဲ့… အရု ပ်ကြိုးပြတ် … ကျနော့်ပေါ်မှာလဲ လဲကျပြီး … ဖုတ်လှိုက်ဖု တ်လှိုက် .. အသက်ငင်နေ ရှာတယ် … မော မှာပေါ့ … ကျနော်… နီ ရဲ တွ တ်နေတဲ့ ချ စ် ချစ် ပါြး ပင် လေးကို … ကျနော် ရွှတ်ကနဲ န မ်းလိုက်တယ် …
“အတူတူပဲ … ကိုရယ် … ခွဲမသွားရဘူးေ နာ် …” “အင်း …”
“ဂတိေ ပး ပါ တ ယ် ချ စ် ချ စ် ရယ်”
ကျနော် ချ စ် ချစက်ို အသာအယာ ဖက်ထားရင်း … အေ မာြေ ဖ လိုက်မိတယ် … ချ စ် ချ စ်ေ လ … ကျနော့်ရင် ခွ င်ထဲမှာ
… ပါးအပ်ထားရင်း … ကျေ နာ့်ကို ချွဲနေတယ် … ချစ် သူနှ စ် ဦးရဲ့အဆုံးစွန် ခရီး ကို အတူတကွရောက်သွားတော့ … ချ စ်ရည်ရွှမ်း တဲ့ စိတ်တွေ …ြ ပည့်နေတာပေါ့ … ကျနော့်ရဲ့နို့သီးထိပ်ဖျား လေးကို … ချစ် ချ စ် လက်ညှိုးလေးနဲ့ တို့ပြီး ကစားတယ် … ကျနော်… ယားမိတယ် … ကျနော့် ဒုတ်က မာ န်မကျ သေးဘူး … အချ စ် စိတ် တက်ကာ …
“ကို … ချ စ် ချစ်ကို ချစ်လားဟ င်”
“ချ စ်တာပေါ့ … ချ စ်ချ စ် ရ ယ် …”
“အရမ်းချစ် တာပဲ လား …”
“အင်း … ချ စ်တယ်ချ စ် တယ် …”
“အင့် … ကိုနော်…ြ ငိမ်ြ ငိ မ်ေ န …”
“ေ နဘူး … နေဘူး …”
“အ … နာ တယ် …”
“ခ ဏလေးပါ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် …”
“အိုး … တော်ပါတော့ဆို … အာ … အီးးး … ဟင့် … ဟ င့် …” “ကောင်းလိုက်တာ ချ စ်ချ စ် ရယ် …”
“ခ ဏလေး … ခ ဏလေး … ချစ် ချ စ် အပေါ်မှာ မေ န နို င်ဘူးကွာ … မျက်စိ တွေြ ပာနြေ ပီ …” “အို ကေ … ဒါဆို အော က်မှာနေလေ …”
ကျနော်တို့ … ဖက်ထားရင်း အပေါ်အောက် … နေရာြေ ပာင်းလိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … တင်းြ ပီး ကြွ နေတဲ့ … နို့အုံ တွေ က ကျနော့်ကို ဖိတ်ေ ခါ် နေသလိုပဲ … ချ စ် ချစ် အကြ ည့်တွေ က … အေ ရာ င်တောက်နေတယ် … တင်းကြွ နေတဲ့ ချ စ် ချ စ် နို့ တွေ ကို ကျနော် လေးငါး ခါလော က် နယ်ပြီ … နို့သီးခေါ င်းလေးကို … ဆတ်ကနဲ စို့လိုက်တယ် …
ကော့တက်လာတဲ့ အဖု တ်ြ ကီးကို … ပြန်ကျသွားအောင် … ကျနော်ခ ပ်ြ ပင်းပြင်း လေး … ဆော င့်ထည့်လိုက်တယ်
“အ … မာ မားရေ … ဟီးးး …” “ဟင့် …”
“အ …” “အ… “
ခပ်ပြင်းြ ပ င်းလေးတချက်ချင်း ဆော င့် တ ယ် … ချ စ် ချ စ် … အောက်မှာ ကော့ပျံနေတာ ပဲ … ချ စ်ချ စ်က တကယ် အိုး ကောင်းတ ယ် … အပေါ်က နေ ဆော င့်သမျှ … အင့်က နဲ အင့် က နဲ … တချ က်ခြင်း …
ပြန်က န်တ ကလ်ာတယ် … ကျနော့်အကြိုက်ပေါ့ … စိတ်ကြိုက် ဆော င့် တာ… ဆယ်ခါ ဆယ့်ငါးခါလောက်ဆောင့် ပစ်လို က်တော့ … ပြို ပီး ကြမ်းလာတယ် … ကျနော့် သွေးတွေ ပွ က်ပွ က်ဆူနေပြီ … ကျနော် ချ စ်ချ စ် ပေါ င် လေးကို … ဆွဲမြှောက်လိုက်ပြီး … ရင် ဘ တ်မှာ ကပ်လိုက်တယ် … အဖုတ်ြ ကီးက မတ ရားကော့တက်လာတော့မှ … ကျနော် အားရပါ ရ … ဆောင့်တော့တာပဲ …
“အံ မလေး … နာတယ်… နာ တယ် … ကို … ကို … ဖြေးြေ ဖး”
ြေ ဖြးေ ဖးဆို လဲ … ကျ နော်စ ပိကို လျှော့ လို့မ ရတော့ ဘူး … မာ န် တက်နေပြီ … အားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ … ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ကို တွန်းတယ် … ပ ခုံးတွေကို ကုတ်တ ယ် … မရဘူး … မ ရဘူး … ဟုန်းဟုန်းထ နေတဲ့ ကျနော့်စိတ် တွေ က ဇောင်းကလွှတ်တဲ့ မြင်းလိုပဲ … ဒုန်း စိုင်း ကျုံးတော့ တာပဲ …
“အား … အား … အား …”
“ကို … ကို … သေပြီ … သေပြီ “
ဆောင့် နေ ရ င်းနဲ့ကို … ကျနော့် ဒုတ်ကို … ဆွဲဆွဲမွှေ့ပစ်လိုက်တယ် … တင်းကြပ်နေတဲ့ …
ချ စ်ချ စ်အတ ငွ်း သားေ တွကို … ကျနော့်ဒုတ်နဲ့ထိုးနှောက် မွှေ ပ စ် လိုက်တယ် … အရ မ်း စီးတ ယ်ဗျာ …
ချ စ်ချ စ်က တော့ အော်တာပေါ့ … အော်လေ ပိုမွှေလေ … ထမနဲ ထိုးသလိုပဲ … အားအရ မ်းကုန်ေ ပ မယ့် … ကျနော် တက်ကြွနေမိသည် … ရ ပ်လဲမရပ် ရဲ ဘူး … ရ ပ်လိုက်တာနဲ့… ကျနော့်ဒုတ်ကို … သူ လှုပ် မ ရ အော င် … ညှစ်ထားတော့မှာ … ကြာကြာတော့ … မနေနိုင် ပါဘူးဗျာ… ကျနော့်ဒုတ်လဲ ပေါက်ကွဲမတတ် … တင်းကားနေပြီး … ကျနော်ပြီးတော့မယ် … ပြီး တော့မ ယ် …
“တော် … တော်ပါ တော့… ကိုရယ် … အီးးးး …”
“ထွက်ပြီ .. ထွက်ပြီ … ရှီးးးးးးးးး …. ” ကာမအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်သွားတော့လဲ … ဖ တ်ဖတ်ကို မော သွားတာပဲ … နှစ် ယောက်သား … ဖ က်ထား ရင်း … မှိ န်းနေလို က်မိတယ်… စကားလဲ မပြောနို င် တော့ဘူး … မီးကုန်ယ မ်းကုန် ချ စ်ကြွမ်းဝင် တော့… အားအတော်ကုန်သွားတယ် … အားကို မ ရှိတော့ တာ … ချ စ် ချစ် ကျနော့် လက်မော င်းပေါ် မှာ ခေါ င်းအုံးပြီး …
ခွေခွေ လေး လဲ နေရှာ တ ယ် … ချ စ်ချ စ်လဲ … အတော်မောရှာ မှာပေါ့ … အြ ပ င်မှာလဲ မိုးတွေက ရွာတယ် … ရွာတယ် … အခ န်းထဲမှာ အေ အးဓါတ်က … စိ မ့်ဝ င် လာတယ် … ကျနော် ဂွ မ်းစော င်ကြီးကို နှ စ် ယောက်လုံးေ အာ င် ခြုံလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ်ကို ခပ်တ င်းတ င်းလေး ဖ က်ထား ရင်း … ကျနော်တို့ မှေးကနဲ အိ ပ် ပျော်သွားတယ် …
ဘယ်လောက်တော င် ကြာ တယ်မ သိ … မိုးကလဲအေး … အိပ်ကလဲ အိပ် ချ င်ဆိုတော့ … တုံးကနဲ ပဲ …
“ဒိန်း ဂျလိန်း …”
မိုးချိ န်းသံကြားမှ … လ န့်နိုး လာတ ယ် … ချ စ်ချ စ်က တော့ … အိပ် နေဆဲ… ပ င် ပန်းရှာ တ ယ်လေ …
မျ က်ေ စာ င် ကော့ကော့လေးတွေက … မျက်လုံးပိတ်ထားတောင် မှ … ကော့ညွတ်နေတ ယ် … မျက်နှာလေးက ပန်းသွေးရောင်ြေ ပးရ င်း … ကလေးလေးလို အိ ပ်ပျော်နေတဲ့ ချစ် ချစ်ကို … ကျနော် ကြည့်မဝ ဖြစ်နေတောာ့တာပဲ … တစိမ့် စိ မ့် နဲ့ထိုင်ကြည့်ေ နမိတယ် … မျက်ခုံး ကောင်းကောင်း … နှာ တံပေါ် ပေါ် ကောင် မ လေးက … ကျနော့်ချ စ် သူဆိုတာ သေချာ သွားပြီ … လူမျိုးမတူတာကတော့ … မတတ်နို င်ဘူးလေ … ဖူး စာပေါ့ … သူတို့အိမ်က သဘောမတူလဲ … ခိုးြေ ပးမှာ ပဲ … ကျနော် ချ စ် ချ စ် နဲ့မ ရဘူးဆိုရ င် … ကျနော် သေနို င် တယ် … တကယ်သေ နို င်တယ် … မ ခွဲ နိုင် တော့ဘူးဗျာ… စော င်လေးကို လှပ်ကြည့်လိုက်တော့ … ကျနော်တို့
နှ စ်ယောက်ကြားမှာ … အနီ ရောင် အ ကွက်တကွက် … မွေ့ယာခင်းပေါ် မှာ စွ န်းထင်းနေတယ် … ကျနော်
ကျေကျေန ပ် န ပ်ြ ကီး … ပြုံးလိုက်မိတယ် … ဘာကြောင့်မှ န်းမသိပါဘူး … ကျနော်တော် တော်ကျေန ပ်သွားတယ် … ကိုယ်ချစ်တဲ့ သကူ အပျိုဖြစ်နေတာ … ကျနော်ကံကောင်းတာပေါ့ … ပ န်းဦးပန်ခွ င့်ေ ပး တ့ဲ ချစ် ချ စ် ကိုလဲ တအားချစ် မိ သွားတယ် … ချ စ်ချ စ် ပါးလေးကို နမ်း လိုက်တယ် … ချ စ်တယ် ချစ် ချ စ် ရယ် … အချ စ် နဲ့အတူေ နရင် အချိန်ကုန်ြ မ န်တ ယ်တဲ့ … နာ ရီကြည့်လိုက်တော့ … ၅ နာရီ လောက်ရှိတော့မယ်ေ ရာ … ချ စ် ချ စ်ကို မနှိုးရက်ေ ပ မယ့် … နှိုး ရ အုံးမယ်… ချစ် ချ စ် အိမ်ြ ပန်ရ အုံး မယ် … အိမ်ြ ပန် နောက်ကျရင် … အဆူခံ ရြ ပီး … နော က်နေ့ မ ထွက်ရရ င် ဒုက္ခ … ကျ နော်ချ စ်ချ စ် ပါး လေးကို ဖွ ဖွ လေးနမ်းလို က်တယ် …
ချ စ်ချ စ် မျက် လုံးလေး … ဖျပ်က နဲ ပွ င့် လာတယ် … ချ စ် ချစ် … ကျနော့်ကို ပြုံးပြုံးလေး… လှမ်းကြ ည့်တယ် …
“ဘာကြည့်တာလဲ …”
“ချ စ် ချစက် လဲ … စွာလိုက်တာ…”
ကျနော် ချ စ် ချစ် ဘေးမှာ … ကပ်ပြီးအိ ပ်လိုက်တယ် … ပူေ နွးတဲ့ ချစ် ချ စ် ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကြောင့် … ကျနော့်စိတ် တွေ … ပြန် လှုပ် ရှားလာတယ် …
“ကို … ဘယ်နှ နာ ရီ ရှိ သွားပြီလဲဟင် …”
“၅ နာရီ …”
“အန် … တ ကယ်ကြီး ၅ နာရီလား …”
“ထ … ထ … ချ စ်ချ စ် … ပြ န်မှြ ဖစ်မယ် …”
“ေ နပါ အုံးဆို …”
“ေ နလို့မရတော့ဘူး … ပြန်မှ ရ မယ် … ကိုရယ် … “
ချ စ်ချ စ် … အိပ်ယာ ပေါ် ကနေ ဝုန်ဒို င်းထ … ကုတင် အောက်မှာြ ပန့်ကျဲနေတဲ့ အင်္ကျီတွေ … အတငွ်းခံ တွေ ကို လိုက်ကောက်တ ယ် …
“ေ နာ က်မှ ကောက်လေ … သ န့်ရှင်းရေးသွားလုပ် အုံး … “
ချ စ်ချ စ် … သုတ်သုတ်လေး … ရေချိုးခန်းထဲြေ ပး ၀ င်သွားတယ် … ဖ င်တုံးလုံးလေးနဲ့ … သုတ်သုတ်လေးြေ ပးသွားတော့ … တင်သားတွေက … ရ မ်းခါတာပေါ့ … ချ စ်ချ စ်က အိုးကောင်းတယ် … တင်းပြီး … တုန်က နဲ တုန်က နဲ လှုပ် ခါသွားတာများ … ကျနော့်စိတ် တွေ လှိုင်းထသွားတယ် … လိုက်သွားတာပေါ့ … နောက်က နေ …
ရေချိုးခ န်းထဲမှာ … ချ စ်ချ စ် သန့်ရှ င်း ရေးလုပ် ဖို့ … ရေခွ က်လေး ကိုင်နေတုန်း … ကျနော်ခွ က်ကို လုလိုက်တယ် …
“ပေးပါ … ချ စ် ချစ်ကလဲ … ကို သန့်ရှ င်းရေး လုပ် ပေးပါ့မယ် …”
“အို … ကိုေ နာ်… ရှက်စရြာ ကီးကွာ … ချ စ်ချ စ်ဘာ့ သာ လုပ် ပါ့ မယ် …” “မ ရဘူး … ပေါင်ကားလိုက်”
ကျနော် … ချစ်ချ စ် ပေါ င်လေးကို ဆွဲဟပြီး … အဖု တ်ကြီး အေ ပါ် နားကနေ … ရေလော င်းချလိုက်တယ် …
“အ … အ … စ ပ်တယ် … ကိုရယ်”
“မကွဲပါဘူး … အထဲ မှာ စ ပ် ဖျင်း ဖျ င်း ဖြစ် နေတာ “
“အပျိုမြှေးပေါက်သွားလို့နေမှာ ပေါ့ ”
“အင် … ဟုတ်လား”
တအံ့တသြ ဖြ စ်နေတဲ့ ပုံလေးက … ချစ် စရာ လေး … ဘယ်လိုလေးမှန်း မသိပါ ဘူး … ပိုချွဲ လာသလိုပဲ … ကျနော် သဘောကျမိတ ယ် … အဖုတ်ကြီးကို ဆ ပ်ြ ပာ ရည်နဲ့ပွ တ်ပြီး … ဆေးပေး ရ င်း… ရေလောင်းချလိုက်လိုက်တယ် …
မြန်ြ မန်လုပ်မှ … နို့မို့ ရင် … ကျနော့်စိ တ်တွေပြန် ထလာပြီး … နောက်တ ချီဆွဲ မိလိမ့် မ ယ် … ချ စ်ချ စ်လဲ သိတယ်ထင် ပါရဲ့… ခပ် သွက်သွက်ပဲ သန့် ရှင်းရေးလုပ်တယ် …
“ကို … အြ ပ င် မှာ ခဏစော င့်ေ နနော် …”
“ဘာလုပ် မ လို့လဲ …”
ှ”ရှူရှူး ပေါ က်မလို့ …”
“ေ အာ် “
ကျနော် မျက်နှာ သုတ်ပ ၀ါ လေးကိုင်ြ ပီး … အပြ င် မှာ … စော င့်နေ လိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် သန့် ရှင်းရေးလုပ်ြ ပီး … အြ ပင်ထွက်လာမှ … ကျနော် ချ စ် ချ စ် ကိုယ်လုံးလေးကို … တယုတယ နဲ့ … သုတ်ပေးလိုက်တ ယ် …
“ကို … ချ စ် ချစ် … နော က်ကျနြေ ပီသိလား …”
“အင်း … ခ ဏ လေး ဟိုဘက်လှည့် …”
“အို … ကိုကလဲ … ချ စ် ချစ်ကို အရု ပ် လေး ကျနေတာပဲ …” “ချ စ်တာကိုးလို့ … “
“ကိုနဲ့ချစ် ချ စ်က … အခု ဆို ဘာလဲဟ င် …”
“လင်မယာေ ပါ့လို့ …”
“ဟွန့် … သူ့ကို ဘယ်သူက လ က်ထပ် မယ်ြေ ပာလဲ …”
“အဟိ … ချ စ်လို့ စတာေ နာ်”
“စိတ်ဆိုးတယ်ကွာ … အိမ် မြ ပ န် နဲ့ တော့ “
“အင် … မြ ပန် ရင် … ပါ ပါ သတ်မှာပေါ့ …”်
“ကိုနဲ့ ပဲ တသက်လုံးနေတော့ …”
“အာာ … ဒုက္ခပါ ပဲ …”
အင်္ကျီတွေ ၀ တ်ရ င်း … ကျနော် … ချစ်ချ စ်ကို စနေ မိသ ည် … ချစ် ချ စ်ကလဲ ကျနော် တမ င် စ မှန်းသိတော့ …
ပြန်နောက်သည် … ချစ် ချစ် ရဲ့အတွ င်း သား တွေလုံလြုံ ခုံြ ခုံြ ဖ စ်သွားတော့မှ … ကျနော် ချ စ် ချ စ်ကို တချက်နမ်းလိုက်တယ် …
“ချ စ် ချစ် … ကိုတို့ လက်ထပ်ကြမယ်လေ …”
“အင်း … ဘယ်တော့လဲ …”
“မ နက်ဖြန် …”
“အင် …ြ မန် လိုက်တာ …”
“မ ကောင်းဘူးလား …”
အားလုံး သပ်သပ် ရ ပ်ရပ် ဝတ်ြ ပီးသွားတော့ … ချစ် ချစ် ပုံ လေးက … တမျိုးလေး ဖြစ်ေ နသ ည် … မျက်နှာ လေးက … နဲ နဲ လေးေ တာ့ နွ မ်းနေ တာပေါ့ … ဒါ ပေမယ့် ပိုလှနေသလိုပဲ … ကျနော်တို့ အောက်ထ ပ် ဆ င်း လာတယ် …
“ချ စ် ချစ် … နာ နေ သေးလား…”
“အင်း … နာ တာ ပေါ့ … တမျိုးကြီး ဖြစ် နေတ ယ် …”
“အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်အုံးနော်“
ကျနော်တို့ လ က်ချင်းတွဲပြီး … ချ စ် ချ စ်အိ မ်ကို ပြန် ဖို့ … လမ်းလျှော က်ကြတယ် … တိုက်ဆိုင်တာပဲ လား … ကံဆိုးတာပဲလားမသိ … လမ်းထိပ်ရောက်လို့ … ဟိုဘ က်အကွေ့ … ကုလားကြီးတ ယောက်က …
“အင် … ပါ ပါး…”
ဆတ်ကနဲ … ကျနော် လန့်ြ ပီး … လက်ချ င်းချိတ်ထားတာ ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်မိတ ယ် … ဒါပေ မယ် ချစ် ချ စ် က …
လက်တွဲထားတုန်း … လက်ကို အတ င်းဆုပ်ထားတယ် … ချစ် ချစ် မျက်နှာ သိသိသာသာ ကွက်ကနဲ
ပျ က်သွားတယ် … ဒါက သူ့အေ ဖထင် ပါရဲ့… ချ စ် ချ စ် အဖေက ထော င် ထော င် မော င်းမောင်းနဲ့ … မျက်နှာ ကြောက တင်းေ နတာပဲ …
“သူက ဘ ယသ်ူလဲ … ဂျူလီယာ …”
“သူငယ်ချ င်းပါ … ဂျူလီယာ ချော်လဲလို့ … အိ မ်ပြန်လိုက်ပို့ေ ပးနေတာ …”
“ေ အာ် … အေး … ငါတော့ မယုံဘူး … လာခဲ့ … အိ မ်ြ ပ န်မယ်…”
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … ဂျူလီယာ … မလိုက်ာချင်ဘူး … မ လိုက်တော့ ဘူး …” “ဘာ …”
“ဂျူလီယာ … သူနဲ့မ ခွဲနို င် ဘူး”
“ငါ သဘောမတူဘူး …”
ဆတ်ကနဲ … ကျနော်တို့ ချိတ်ထားတဲ့လက်ကို အတင်းဖြုတ်ပြီး … ဂျူလီယာ့ကို ဆွဲခေါ် သွားတယ် … ကျနော်ပြန်ဆွဲ မလို့ပါ ပဲ … သူ့ တပည့်တွေ လားမသိဘူး … ကုလား သုံးလေးယောက် … ကျနော့်ဘေးမှာ ၀ိုင်းလာတယ် … တောက် …
“ညီလေး … မ င်း မလိုက်သွားပါနဲ့ …”
“ငါ့ကို ဆ ရာ လာမလုပ် နဲ့…”
“အကိုတို့ တော င်းပန် ပါ တယ်ကွာ … အကျယ်အကျယ် မြ ဖစ် ချင်ဘူး …”
“လိုက်မယ်ဗျာ… ဘေးဖယ် …”
“ဂျူလီယာ့မှာ… စေ့ စပ် ထားတဲ့လူ ရြှိ ပီး သား … ညီလေး မသိ ဘူးလား …”
“စိတ်မ ကောင်း ပါ ဘူးကွာ … မ ပတ်သက်ပါ နဲ့တော့ … အကိုတို့ တောင်းပန် ပါ တယ်ကွာ”
ကျနော် စိတ်မကောင်းပါဘူး … ချ စ်ခဲ့ ကြတဲ့ … ပျော်ရွှင် ခဲ့ ကြတ့ဲ အချိ န် တွေ … အရည်တွေပျော်ကျသွားသ လိုပဲ …
ကျနော် အံ ကြို ကိတ်ပြီး … လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါ အော င် …. ဆုပ်ြ ပီး … အကြံထုတ်နေ မိသည် …
ဘာလုပ်ရ မ လဲ… ဘာလုပ် ရမလဲ … ဖု န်းကို အားပြည့်အောင်ြ ဖည့်ထားပြီး … ချ စ်ချ စ် ဆက်သွယ်လာမယ့်အချိ န်ကို စော င့်နေမိ၏ … တကယ်ကို မ နေတတ်ဘူးဗျာ… ရ င် တွေ လဲ ပူနေတယ် … ချ စ်ချ စ်
… ဘယ်ရောက်နေလဲ … ကျနော်အ ရ မ်းသိချ င်တ ယ် … သူ့အိမ် နားကိုလဲ … ရ စ်သီရစ် သီနဲ့လာစောင့်နေ မိသည်… ချ စ်ချ စ် မျ က်နှာ လေးကို အရိပ် အြ ခည်တောင် မတွေ့ … စိ တ်ဓါတ်ကျ နေတုန်း မှာပဲ … ဖုန်းထဲကို SMS ဝင်လာသ ည် …
မနက်ြ ဖန် … ဂျူလီယာ့ ကို လာခိုးပါ … ပါပါ က … ဟိုလူကြီးနဲ့ပေး စားတော့မယ် … လှည်းတန်းသင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန် တခါထဲလိုက်ခဲ့မယ် … ကို့ကို မ ခွဲနိုင်ဘူး…
ဂျူလီယာ
ဟိုက် … ကျနော့်ကော င် မလေး အိမ်က … သသွားလို့ ဖြစ်မယ် … သူ့အဖေ သဘောတူထားတဲ့ တယောက်နဲ့ပေးစား တော့မှာပါလား … ဒုက္ခပါပဲ … ဘယ်ကို ခိုးေ ပြး ရမလဲ … ရန်ကုန် မှာဆို ပြန် မိသွားနိုင်တ ယ် … နယ်ဘက်ကို ခိုးြေ ပး မှ … ဟုတ်ပြီ … ဟိုလူကြီး … ကိုဟိတ် ရှိ တယ် … ကျနော်ဖုန်းအြ မန်ဆက်လိုက်တယ် … ဖု န်းမအားဘူး … အရြေး ကီးပါ တယ်ဆိုမှ … ဒီလြူ ကီးက ဘယ်ကော င် မလေးနဲ့ ကျူနေလဲ မသိ … ကျနော် … ထပ်ခါ ထပ် ခါထ ပ်ခါ ဆက်မိတယ် … ကိုးခါလော က်ေ ခါ် ရတ ယ် … အဲ ဒီတော့မှ ဖု န်းဝင်တယ် …
“အကို … ကျနော် သော်ဇင် ပါ … အကို …”
“ေ အး … ပြော … ညီလေး …”
“တခုလော က် အကူအညီတောင်းမလို့ …”
“အင်း … ဘာကူညီရမလဲ …”
“ကျနော် … မိ န်းမခိုး မလို့ .. ဘယ်ကို ခိုးပြေးရမလဲ …”
“သောက်ပ လုတ်တုတ် … နင့် ကော င် မလေးက … အသက်ြ ပည့်ပြီလား …”
“အသက် ၂၀ လော က်ရှိ တော့မယ် …”
“အင်း … အောင် ပ န်းက … လိမ္မော်ြ ခံ ထဲမှာ … သွားနေ မလား …”
“ဟုတ်ကဲ့ … အကို …”
“အဲ ဒီမှာလဲ … လူလိုနေတယ် … မ င်းလဲခြံအလုပ် ၀ါသနာ ပါ တ ယ်ဆို”
“သိပြီ … ကျနော် ခြံအလု ပ်လုပ်တတ်ပါတယ် …”
“အို ကေ …မ င်း တောင်ြ ကီး ကားလက်မှတ်ဝယ်ြ ပီးသာ… သွားတော့ … ငါ ဖု န်းဆက်ထားပေးမယ် … ဘာမှ စိတ်မပူ နဲ့…”
“ဟုတ်ကဲ့ … ကျေးဇူးပါခင် ဗျ …”
“ေ အာ် ဒါနဲ့ …”
“ဟုတ်ကဲ့ အကို …”
“မ င်း လိမ္မော်ခြံထဲ ရောက်ရ င် … ဖြေးေြ ဖး တော့ လုပ် နော်… ငါ့လိေ မ္မ်ာသီးတွေ ငလျ င်လှုပ်လို့ …
အပင်ကြေ ကွကျကုန် မ ယ် …”
“ဟား ဟား ဟား …”
ဂွ ပ်ကနဲ … ဖုန်းချ သွားတယ် … ကျနော် …ြ ကိတ်ပြီးရီ မိတယ် … တော်တော်ေ နာ က်တဲ့လြူ ကီး … ကျနော်မိ န်းမခိုးပြေးတာနဲ့ … သူ့လိေ မ္မ်ာခြံထဲက … အသီးတွေြေ ကွကျတာနဲ့ … ဘာဆိုင် လို့လဲ … အဟိ …
ြေ ပာ သာပြောရတ ယ် … ကျနော့်ကော င် မလေးရဲ့အိုးတောင့်တောင့်လေးကို … မျက်စိ ထဲမှာ မြင်ြ ပီး …
ကိုဟိတ်ေ ရ … စိတ်သာချ … ခင် ဗျား လိေ မ္မ်ာသီးေ တွ အကုန်ြေ ကွ အောင် လုပ်ြ ပ မယ် … စိတ်ထဲကြ ကိတ်ြ ပီး ကြိမ်းဝါးလိုက်သေးတယ် … ကျနော် … အဝတ်အစား တွေ ထည့် … ကားဂိတ်ကို ဖုန်းဆက် … လက်မှတ်နစှ် စောင်
ဖြတ် … ပြီး တော့ … လှည်းတန်းက သ င်တ န်းနား မှာ သွားစောင့် နေလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် သင်တန်းပေါ်တကသ်ွားတာ တွေ့တယ် … ခေါ်တော့ မေ ခါ် ဘူး… ကျနော်နားလည်ပါ တယ် …
သင်တန်းဆ င်းချိ န် တောင် မရောက်သေးဘူး … ကျနော်လိုက်ကြည့်ေ နတာေ ပါ့… ချ စ်ချ စ်ကို တွေ့တယ် … ချ စ်ချ စ် ဆင်းလာ တယ် … ကျနော် အရမ်းပျော်သွားပြီး အြ မ န်ကားငှားလိုက်တယ် … ဈေးလဲ မဆစ်မိဘူး … ချ စ်ချ စ်လဲအနားေ ရာက်ရော … ကားပေါ်တ င်ြ ပီး အဝေြးေ ပးဂိတ်ကို အမြန်ေ မာ င်းခို င်းတာပေါ့… ပျော်လိုက်တာ … ချ စ်ချ စ် ရယ် …
“ချ စ် ချစ် … ကို အရ မ်းပျော်တယ်ကွာ”
“ဟွန့် … ချ စ် ချ စ်က တော့ ရ င်တွေ အရ မ်းတုန်တယ် သိလား”
“တကယ် မှ န်းစမ်း”
“အို လက်ြ ကီးက တော်တော်သရမ်းတ ယ် … ကိုေ နာ် … ကားဆရာကြည့်နေတယ်””
“ကားဆရာကြီး … ရှေ့ ကိုကြ ည့်မော င်းေ နာ် “
“ေ အးပါ ကွ… တ ခါ ပဲ လှည့်ြ က ည့်မိပါ တယ်”
ကျနော်နဲ့ချစ် ချစ် တယောက်ကိုတယောက် မျက်စြိ ပူးပြရင်း … ခိကနဲ ရီလိုက်မိကြတယ် …